ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: October 2008
သူငယ်ချင်းများအကြောင်းရေး တာ အတော်များသွားပြီ..။ ရေးစရာတွေ ရှိနေသေးပေမယ့် ဘလော့ဂ်ကြွလာ ဆွေသဟာတို့ ငြီးငွေ့နေမလားလို့ တွေးမိတာနဲ့ တခြားအကြောင်းအရာလေး မျှဝေပါ့မယ်..။ အပြောင်းအလဲ လေးပေါ့..။
ဒီတစ်ခါတော့ .. ယောက္ခမ နဲ့ ချွေးမ ဆိုတဲ့ မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း အချိန်ကာလအမိုးအကာအောက်မှာ နားလည်မှု သံယောဇဉ်တွန်းအားတွေကြောင့် ပေါင်းဆုံသွားတဲ့ အကြောင်းလေး ပြောကြည့်ပါ့မယ်..။
Posted by navana at 3:42 PM
လင်ရယ်မယားရယ် ဆိုပြီး တအိုးတအိမ် ထူထောင်ထားကြပေမယ့်.. သူ့ဖက်ကိုယ့်ဖက် ပါလာတာက အ၀တ်တထည် ကိုယ်တခု သာသာဆိုတော့ သမီးလေး ကိုယ်ဝန် ရှိသည့်တိုင် ကျွန်တော်တို့ မှာ တီဗွီလေး တစ်လုံး တောင် ကြည့်စရာ မရှိခဲ့ဘူး..။
မဒမ်လစာ နဲ့ ကျွန်တော့်လစာ ပေါင်းရင် အထိုက်အလျောက်တော့ ပိုလျှံပါတယ်..။ ဖြစ်ညှစ်ပြီး ၀ယ်မယ်ဆိုရင်တော့ တီဗွီတလုံး ၀ယ်နိုင်လောက်ပေမယ့် မဒမ့်ခမျာ မိန်းမသားတို့ ထုံးစံအတိုင်း လက်ဝတ်လက်စားဖက် မှာ အာရုံပိုကျနေခဲ့လို့ တီဗွီဖက် အလှည့်မရောက်ခဲ့ရဘူး..။
သမီးလေး ကိုယ်ဝန်ရပြီဆိုမှပဲ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံး တီဗွီဝယ်မယ် လို့ တွေးမိကြတော့တယ်..။
မဒမ့်မှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အလေ့အထ လေး တခုရှိတယ်..။ အဲဒါကတော့ အကြောင်းကိစ္စကြီးငယ် ရှိတိုင်း မဒမ်က “ မိသားစု အစည်းအဝေး ” ခေါ် တာပဲ..။ မိသားစု အစည်းအဝေးဆိုလို့ လူအများကြီးလို့ မထင်နဲ့အုံး..။ သူနဲ့ကျွန်တော် နှစ်ယောက်တည်း စည်းဝေးဆုံးဖြတ်ကြတာ..။
အစည်းအဝေးတိုင်း မဒမ်က ဦးဆောင်တယ်..။ meeting agenda ကိုလဲ သူပဲ ရေးဆွဲစီစဉ်တယ်..။
တီဗွီဝယ်မယ်..။ budget က တသိန်းလောက် မှန်းတယ်..။ ပထမနှစ်လ သုံးသောင်းဆီ .. နောက်ဆုံးလ လေးသောင်း စုမယ်.. ။ သဘောတူလား ပေါ့..။ မဒမ်က သဘာပတိနေရာကနေ အတည်အတန့် အဲသလို မေးရင် ကျွန်တော်က “ သဘောတူပါတယ် ” လို့ ပြန်ဖြေရတယ်..။
ကျွန်တော့်အဖြေကို ရတာနဲ့ မဒမ်က အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးပြီ လို့ ကြေငြာတယ်..။
(အခုတော့ အဲသလိုအစည်းအဝေး လုပ်ရင် သားရော သမီးရော တက်ရောက်ကြရတယ်..။ သားနဲ့သမီး နားလည်လည် မလည်လည် မဒမ်က သူတို့ကိုပါ သဘောတူလား လို့ အမြဲမေးတယ်..။ ကလေးလေးတွေကလဲ.. မိဘနှစ်ပါးနဲ့ အဲသလိုမျိုး လုပ်ရတာကို ပျော်နေတော့ သဘောတူလားမေးတိုင်း သဘောတူတယ်လို့ အော်တော့တာပဲ..။)
ဆိုတော့ လင်မယားနှစ်ယောက် တီဗွီဝယ်ဖို့ ပိတ်ရက် မြို့ထဲ ထွက်ကြတယ်..။ ပန်းဆိုးတန်း တလျှောက် ဆိုင်တွေ ဗိုက်ကလေး ကော့တော့်ကော့တော့်နဲ့ ပေါ့..။
Samsung Show Room ထဲ ၀င်ကြည့်ပြီး စိတ်တိုင်းကျတာ မတွေ့လို့ ပြန်ထွက်အလာမှာ လူတစ်ယောက်က ကျွန်တော်တို့ လင်မယားကို Show Room ဈေးထက် ချိုစေရမယ် လို့ လာပြောတာနဲ့ သူခေါ်တဲ့နောက် ဇဝေဇ၀ါ နဲ့ လိုက်ခဲ့ကြတယ်..။
အနော်ရထာ လမ်းမပေါ်က ဆိုင်တဆိုင်ရဲ့ အပေါ်ထပ်မှာ လိုချင်တဲ့ တံဆိပ်ပြော.. Show Room ထက် ဈေးမချိုရင် မ၀ယ်နဲ့ ပစ္စည်း လဲ အာမခံတယ် ဆိုတာနဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက် ခေါင်းချင်းဆိုင် တိုင်ပင်ပြီး TOSHIBA လက်မ နှစ်ဆယ် ကို ကိုးသောင်း ငါးထောင်နဲ့ ၀ယ်ခဲ့ကြတယ်..။
တီဗွီဝယ်ပြီးပြီးချင်းပဲ စက်ရုံကိုလှမ်းဖုံးဆက်ပြီး အင်တန်နာ ထောင်ဖို့ လိုအပ်တာလေးတွေ ကြိုဝယ် စီစဉ်ထားပါ လို့ ကျွန်တော့်အောက်က အင်ဂျင်နီယာများကို ပြောလိုက်တယ်..။
နောက်တော့ တက်စီ ငှား ၀ယ်ထားတဲ့ တီဗွီကို တင်ပြီး လင်မယားနှစ်ယောက် ပျော်ပျော်ကြီး လှိုင်သာယာ စက်ရုံကို ပြန်ခဲ့ကြတယ်..။
စက်ရုံရောက်တော့ ပြင်ဆင်စရာပြင်ဆင်.. ဆက်သင့်တဲ့ကြိုးတွေ ဆက်.. ထောင်သင့်တဲ့ တိုင်ထောင်တယ်..။
အဲဒီနေ့ညက လင်မယားနှစ်ယောက် ဘ၀ရဲ. ပထမဦးဆုံး ကိုယ်ပိုင် တီဗွီကို “ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ.. မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား ညပိုင်း အစီအစဉ်များ ပြီးဆုံးပါပြီ ” ဆိုတဲ့ စာတမ်း ထိုးတဲ့ အထိ ထိုင်ကြည့်ပစ်လိုက်ကြတယ်..။
နောက်နေ့မနက် အလုပ်ထဲမှာ “ ငါ့အိမ်က တီဗွီက မနေ့ညက မြန်မာကား လာတယ်ကွ ” လို့ ဟာသလေးနှောပြီး ကျွန်တော်ကြွားတော့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက ၀ိုင်းရယ်ကြတယ်..။
Posted by navana at 2:03 PM
သမီးလေး မွေးမယ့်ရက် Due ဖြစ်ခါနီးတော့ လင်မယားနှစ်ယောက် မိသားစု အစည်းအဝေး ထိုင်ကြတယ်..။ ရိုးရိုးမွေးမလား ခွဲမွေးမလား တိုင်ပင်ကြတာပဲ..။ နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်ဝန်အပ်ထားတဲ့ အိုဂျီ သဘောအတိုင်း မွေးကြမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်..။
အဲဒါနဲ့ အိုဂျီကို တိုင်ပင်တော့ အိုဂျီက ခွဲမွေးဖို့ အားပေးတယ်..။ သူကိုယ်တိုင် ခွဲမယ်..။ ဘုရင့်နောင် ဈေးနားက နိုက်တင်ဂေး ဆေးခန်းမှာ မွေးမယ်လို့ ပြောတာနဲ့ နိုက်တင်ဂေး ဆေးခန်းကို လင်မယားနှစ်ယောက် ရက်ချိန်းသွားယူကြတယ်..။
မွေးမယ့်အချိန်ကိုတော့ ဦးရီးတော် ဗေဒင်ဆရာကို အခါရွေးခိုင်းလိုက်တယ်..။ သူရွေးပေးတဲ့ အချိန် အိုဂျီကို ပြောတော့ အိုဂျီက လက်ခံတာနဲ့ ခွဲမယ့်နေ့ မတိုင်ခင် တစ်ညစောပြီး နိုက်တင်ဂေး ဆေးခန်းကို လင်မယားနှစ်ယောက် ထွက်လာခဲ့ကြတယ်..။
သူ့ဖက်ကိုယ့်ဖက် မိဘများကိုလဲ ပြောမနေကြတော့ပါဘူး..။ သူ့ဆွေမျိုးကိုယ့်ဆွေမျိုး ဆိုတာလဲ နီးနီးနားနား မရှိတော့ လင်ကိုမယား နှစ်ယောက်ထဲ ပေါ့..။ အမေ့ကိုတော့ သတိရမိသလို ဖြစ်ပါတယ်..။ အမေရှိရင် ကောင်းမှာလို့ လဲ တွေးမိတယ်..။
ဒါပေမယ့် လှမ်းမှာလဲ.. လာချင်မှ လာမှာ..၊ မလာရင် ကိုယ်ပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရအုံးမယ် လို့ တွေးမိတာနဲ့ အမေတို့ ဆီကိုလဲ.. အကြောင်းမကြားဖြစ်တော့ပါဘူး..။
ဆေးခန်းမှာက ကိုယ့်လို မွေးလူနာ သုံးယောက်လောက် ရှိတယ်..။ ကြည့်ဖူးတဲ့ တရုတ်ကားတွေထဲကလို ကိုယ့်ကလေး သူ့ကလေး လွဲမှာ ကျွန်တော် စိုးနေမိတာနဲ့ သူတို့ကလေးလေးတွေကိုမဆီမဆိုင် ကျွန်တော် လိုက်ကြည့်သေးတယ်..။
ခွဲစိတ်ဖို့ အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်တော့ မဒမ်ကို ခွဲခန်းဝတ်စုံ ၀တ်ပေးကြတယ်..။ ခေါင်းစွပ်နဲ့ ဘာနဲ့ဆိုတော့ အမြင်ဆန်းပြီး အတော့်ကို ကြည့်ကောင်းတယ်..။ နောက် မဒမ် ခွဲခန်းထဲ ၀င်သွားတယ်..။ ကျွန်တော်ကတော့ အပြင်ဖက် ခုံတန်းမှာ မျက်နှာကျက် မော့ကြည့်လိုက် နံရံ ကြည့်လိုက် ဘယ်လက်ကို ညာလက်နဲ့ ဖြစ်ညှစ်လိုက် လုပ်နေခဲ့တယ်..။
သိပ်တော့ မကြာလိုက်ပါဘူး..။ နှာ့စ် မတစ်ယောက် သမီးလေး ကို ပွေ့ပြီး ထွက်လာတယ်..။ အဲဒါ ကျွန်တော့်သမီးလေး လားလို့ မေးတော့ နာ့စ်မက ပြုံးပြီး ခေါင်းညိမ့်ပြတယ်..။ မထိရက် မကိုင်ရက် နီတာရဲလေး ပေါ့..။ ဘယ်သူနဲ့ တူမှန်းကို မသိပါဘူး..။ ငယ်ငယ်မွှားမွှား ပိစိလေးဆိုတော့ ကျွန်တော့်မှာ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်နေခဲ့တယ်..။
နောက် မကြာဘူး..။ မဒမ်ကို တွန်းလှဲ နဲ့ တွန်းထုတ်လာတယ်..။ မေ့ဆေး မပြယ်သေးလို့ မျက်စိမှိတ်ထားပေမယ့် နှုတ်ခမ်းနီတောင် မပျက်ဘူး..။ ကလေးတစ်ယောက်မွေးပြီး ထွက်လာတာတောင် လှတုံး ပဲ.. ဟဲဟဲ..။
မေ့ဆေးပျယ်တော့ သမီးကို မဒမ်က နို့တိုက်တယ်..။ သမီးလေးကို သူ့ဘေးနား ဘေးစောင်းသိပ်ပြီး အိုအိုအေအေ ပါးစပ်ကရွတ်ရင်း နို့တိုက်နေတာကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော့်မှာ ပီတိတွေ ကို ဖြာလို့ ..။
Posted by navana at 2:01 PM
သမီးမွေးတာက သက္ကရာဇ် နှစ်ထောင် ဒီဇင်ဘာ (၅) ရက်ဆိုတော့ ဆောင်းတွင်းကြီး..။ ပေါက်လိုက်တဲ့ ရှုးရှုး.. မပြောပါနဲ့တော့ .. ။ အိမ်ဖော်ကမရှိ.. မဒမ်က မီးတွင်းဆိုတော့ အလုပ်ဆင်းပြန်လာတာနဲ့ ရေချိုးခန်းထဲဝင် အနှီးပုံ ကျွန်တော် ထိုင်လျှော်ရတယ်..။
အနှီး အထည် နှစ်ဆယ်လောက် ရှိတာတောင် သိပ်ပြီး လိပ်ပတ်မလည် ချင်ဘူး..။ ရှုးစိုတဲ့ အနှီးဆိုရင် လျှော်ရ လွယ်တယ်..။ နည်းနည်းပါးပါး ဆပ်ပြာ ပွတ်ပြီး ရေလျှော်လိုက်ရင် ရပြီ..။ အနံ့ ပျောက်ရုံပေါ့..။ အီးအီး ပေတဲ့ အနှီးဆိုရင်တော့ Brush နဲ့ အီးအီးတွေ စင်အောင် အရင်လုပ်ပြီး မှ လျှော်ရတော့ လက်ဝင်တယ်..။
ဒီကြားထဲ ရုပ်မြင်သံကြား ဇာတ်လမ်းတွဲ ကောင်းရင် ရေချိုးခန်းတံခါးပေါက်ကနေ လျှောက်လက်စ အနှီး တန်းလန်း နဲ့ လှမ်းလှမ်းငေးသေးတော့ တခါတရံ ဆို ညဆယ်နာရီ ဆယ့်တစ်နာရီလောက်မှ အနှီးလျှော်တာ လက်စသတ်နိုင်တယ်..။
မှတ်မှတ်ရရ .. (၂၀၀၀) ခုနှစ် အကယ်ဒမီ ပေးပွဲညက ဆို အနှီးလျှော်တာ မနက်သုံးနာရီထိုးတဲ့ အထိပဲ..။ ညဦးပိုင်း အကယ်ဒမီပေးပွဲ လာနိုးလာနို်းနဲ့ မျှော်နေလိုက်တာ .. လာတော့မလိုလိုနဲ့ .. သတင်းအားလုံးပြီး မှ လာတော့ .. အကယ်ဒမီပေးပွဲလဲ ပြီးရော.. အချိန်လွန်သွားပြီ..။
အလုပ်ထဲမှာ ပင်ပမ်းခဲ့တာရယ်.. အချိန်ကလဲ အိပ်ချိန်ကျော်နေပြီဆိုတော့ အရမ်းကို အိပ်ချင်နေခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော်ညပိုင်း အနှီးမလျှော်ဖြစ်ရင် နောက်တနေ့ အတွက် အနှီးက မရှိတော့ဘူး ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ အိပ်ချင်စိတ်ကို အတင်းဖျောက်ပြီး လျှော်ရတာပေါ့..။
နောက်တနေ့မနက် အလုပ်ထဲမှာ အဲဒီအကြောင်း ကျွန်တော်ပြောတာကို ကြားတဲ့ ကျွန်တော့်အထက်လူကြီးက သူ့မိန်းမကို ပြန်ပြောတော့ သူ့မိန်းမက အနှီး အထည်နှစ်ဆယ် ပေးလိုက်တယ်..။
အဲဒီတော့မှ ကျွန်တော်လည်း အနှီးလျှော်ရတဲ့ အကြိမ်ရေ လျော့သွားတော့တယ်..။
မြန်မာစကားမှာ သွေးက စကားပြောတယ် ဆိုတာ ရှိတယ်..။ တကယ်တမ်း စေ့စေ့တွေးကြည့်ရင် အဲဒီစကားမှာ ယုတ္တိဗေဒဆိုင်ရာ အားနည်းချက် များစွာရှိပေမယ့် မြန်မာတော်တော်များများရဲ့ လက်သုံးစကားတော့ ဖြစ်နေခဲ့တာပါပဲ..။
ကျွန်တော့်အသိ ညီအမနှစ်ယောက်ရှိတယ်..။ အကြီးက မွေးစားသမီး..။ အငယ်ကတော့ သားသမီးမရတော့ဘူး အထင်နဲ့ အကြီးကို မွေးစားပြီးမှ မွေးလာတဲ့ သမီးအရင်းပဲ..။ သူတို့ငယ်စဉ်တောင်ကျေးဘ၀မှာ တကယ့်ကို ညီအမရင်းချာလို ချစ်ခဲ့ကြင်နာခဲ့ ယုယခဲ့ကြတယ်..။
ဒါပေမယ့် အကြီးမ မင်္ဂလာဆောင်တော့ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး သူများအရေး မနာလို မရှုစိမ့်သူတွေက အငယ်မကို သွေးထိုးလိုက်တာ တသက်လုံး တည်ဆောက်လာတဲ့ ညီအမ သံယောဇဉ်ဆိုတာ အစအနတောင် မကျန်တဲ့အထိ ဖြစ်သွားရော..။
တခါတခါတော့ တွေးမိပါရဲ့..။ တအူတုံဆင်း မောင်နှမအရင်း နှစ်ယောက် လူမမယ် အရွယ်မှာ ကွဲကွာသွားပြီး ကြီးမှ အမှတ်မထင် ပြန်တွေ့ရင် သွေးက စကားပြောပါ့မလားလို့..။ ကျွန်တော့်အထင် အခြေအနေက သူတို့နှစ်ယောက် ချစ်ကြိုက်လောက်တဲ့အထိ အခွင့်သာခဲ့ရင် မောင်နှမချင်းတောင် ရည်ငံချင် ရည်ငံနေမှာပဲ..။
တဖက်က လှည့်စဉ်းစားတော့လဲ မောင်နှမ အရင်းထင်နေတဲ့ မွေးစားမောင်နှမတွေ သွေးမတူပေမယ့် သူတို့အသိမှာ အရင်းထင်နေခဲ့ရင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်ကြိုက်ဖို့ဆိုတာ.. ဘယ်လိုမှကို မဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူး..။
ဆိုတော့ သွေးက စကားပြောတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး..။ ကိုယ့်သွေးကိုယ့်သား ဆိုတဲ့ အသိက စကားပြောနေတာပါ..။ အဲဒီ အသိမရှိတော့တာနဲ့ အားလုံး ဇာတ်လမ်းပြတ်တော့တာပဲ..။
ကျွန်တော့်အမေလည်း သူသူငါငါ သုံးတဲ့ “ သွေးကစကားပြောတယ်” ဆိုတဲ့ စကားလုံး နဲ့ သမီးလေး ငါးလအရွယ်လောက်မှာ မန္တလေးက နေ ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့် ပေါက်ချလာခဲ့တယ်..။ ကျွန်တော်တို့ လင်မယားကတော့ သွေးက ပြောပြော ဘာကပြောပြော အမေရောက်လာလို့ ပျော်ရပါတယ်..။
အမေကတော့ သူ့မြေးဦးကို လက်ကမချ.. “ သားအချစ် မြေးအနှစ် ” လုပ်နေတော့တယ်..။
Posted by navana at 1:56 PM
အမေရောက်လာပြီး နောက်ပိုင်း ကလေးကြည့်တာ.. ထမင်းဟင်းချက်တာ.. အနှီးလျှော်တာ.. အစစ အရာအရာ အထာကျလာခဲ့တယ်..။ ကျွန်တော်တို့ လင်မယားနဲ့ အမေနဲ့ အားရင် အားသလို အားတဲ့သူက လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ကြတော့ အရင်ကလို ကျွန်တော်ညည့်နက်သန်းခေါင် အနှီးလျှော်ရတာမျိုး မရှိတော့ဘူး..။
ဒါပေမယ့် အမေသူ့မြေးကို ကူကြည့် အိမ်မှုကိစ္စ၀ိစ္စကို ကြုံသလို ကူလုပ်နေရတာကို အမေကိုယ်တိုင် ဘာမှ မပြောပေမယ့် ကျွန်တော့်ညီအကိုမောင်နှမများကတော့ တမျိုးထင်နေခဲ့ကြတယ်..။ ကျွန်တော်ကတော့ သူ့သားရဲ့ ကလေး သူ့မြေးကို လာကြည့်ရင်း အိမ်မှုကိစ္စတချို့ အမေလုပ်နေခဲ့တာ ရေးကြီးခွင်ကျယ် ကိစ္စလို့ကို မထင်ခဲ့ရိုး အမှန်ပဲ..။
မဒမ်ကလည်း အင်မတန်အလုပ်လုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးဆိုတော့ ကလေးမွေးထားတာ မကြာသေးသည့်တိုင် အိမ်အလုပ်တွေ ကြုံးရုံး လုပ်တတ်လို့ တားတောင် နေရတယ်ဆိုတော့ အမေအိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ရတယ်ဆိုတာ အပရိက ပါ..။
ဒါပေမယ့် ညီအကိုမောင်နှမ များရဲ့ အမြင်စောင်းမှုက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အထွဋ်အထိပ် ရောက်လာခဲ့တယ်..။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော့်အထက်က အကို အဆိုးဆုံးပဲ..။ သူက အဲဒီအချိန်တုံးက ဆည်မြောင်းတည်ဆောက်ရေး တခုမှာ အတော်အဆင်ပြေနေတဲ့အချိန် ဆိုတော့ သူပြောရင် ကျန်ညီအကိုမောင်နှမများက လက်ခံကြတယ်.။
တရက် သူ ကျွန်တော့်ဆီ ညကြီးမင်းကြီး ဖုံးဆက်လာတယ်..။
လုံခြုံရေး ဂိတ်က ဖုံးကို ဆက်တာမို့ ကျွန်တော် စက်ရုံ ဂိတ်သွားပြောရတယ်..။ စပြောတဲ့ အသံ နားထောင်လိုက်ကတည်းက သူ နည်းနည်းထွေ နေတာကို သတိထားလိုက်မိတယ်..။ ကျွန်တော့်နာမည်ကို ခပ်ဆတ်ဆတ် သူခေါ်တယ်..။
သူ့ဖက်က ဖြစ်နေပျက်နေတာ မသိတဲ့ ကျွန်တော် အေးရာအေးကြောင်း ပဲ ပြန်ပြောနေမိတယ်..။ ဒါပေမယ့် သူ့အသံက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မာလာတယ်..။ “ အမေ မင်းအိမ်မှာ ဘာလုပ်နေလဲ ” လို့ သံပြတ်နဲ့ သူမေးတော့ နည်းနည်း တော့ လွဲနေပြီလို့ ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီ..။
ဒါပေမယ့် “ အမေလား.. သူ့မြေးကို ထိန်းနေတာပေါ့ ” လုိ့ပဲ ကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်..။
“ သူ့မြေးကို ထိန်းရုံပဲလား.. အ၀တ်တွေဘာတွေမလျှော်ရဘူးလား ” လို့ ဒေါသသံ နဲ့ သူဆက်မေးတယ်..။
“ ဟ အိမ်မှာ ငါတို့လင်မယားနဲ့ အမေနဲ့ပဲ ရှိတာ.. ကြုံရင်ကြုံသလိုတော့ လျှော်ရတာပေါ့.. ဘာဖြစ်လို့လဲ ” ကျွန်တော်လည်း နည်းနည်းတော့ တင်းနေပြီ.။
ကျွန်တော့်စကားအဆုံးမှာ “ ဟေ့ကောင် .. အမေက အိမ်ဖော်မဟုတ်ဘူး.. ကျွန်မဟုတ်ဘူးကွ ” တဲ့..။
သူအဲဒီလိုလဲ ပြောလိုက်ရော.. ကျွန်တော်.. အတော့်ကို မှင်သက်မိသွားခဲ့တယ်..။ စိတ်ထဲမှာ မျှော်လင့်မထားတာတော့လဲ ပိုဆိုးတာပေါ့..။ ဒေါသလည်း ထွက်သွားခဲ့တယ်..။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် စိတ်ကို ပြန်ထိန်းပြီး “ မင်းက အမေငါ့အိမ်မှာ သူ့မြေးလာထိန်းရင်း အိမ်အလုပ်တွေ လုပ်နေရတာကို မကြည့်ရက်တာလားလို့ ” ပြန်မေးတော့ “ အေး .. ဟုတ်တယ် ” လို့ သူ ပြန်ဖြေတယ်..။
( ကျွန်တော်တို့ ညီအကိုတတွေ စကားပြောရင် မင်းနဲ့ငါနဲ့ ပဲ ပြောကြတယ် )
“ မင်းတို့က ဘာမှ မပေးဆပ်ရဘဲ အမေကို ချစ်ကြောင်းပြဖို့ ဆိုရင်တော့ အတော့်ကို အားပါးတရ ရှိလှပါလား.. အေး.. အမေငါ့အိမ်မှာ အခုလို နေရတာ ပျော်ချင်မှ ပျော်မယ်.. ဒါပေမယ့် စိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုရင်တောင် ငါ့အိမ်မှာနေရလို့ စိတ်ညစ်တာဟာ.. မင်းချဲထိုးအရက်သောက်ရန်ဖြစ်လို့ အမေစိတ်ညစ်နေရတာနဲ့ စာရင် ဘာမှ မပြောပလောက်ဘူး ”
“ အမေ့ကို မင်းတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ပါးစပ်ကြီးအပြည့်နဲ့ အမေဟာအိမ်ဖော်မဟုတ်ဘူးကွ ကျွန်မဟုတ်ဘူးကွ လို့ လာအော်မနေနဲ့.. အဲဒါတွေထက် ပိုကောင်းတဲ့ .. မင်းတတ်နို်င်တဲ့ .. အမေ့ကို ချစ်ကြောင်းပြဖို့ အခွင့်အရေးအပြည့် မင်းမှာရှိတယ်..။ မင်း အခုလုပ်နေတဲ့ ချဲထိုးတာတွေ ရပ်..၊ ဘောလုံးလောင်းနေတာတွေရပ်..၊ မူးရူးပြီး မကြာခဏ ရိုက်ဟယ်နှက်ဟယ် ဖြစ်နေတာတွေ မဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်.၊ အဲဒါဆိုရင် မင်းချစ်တဲ့အမေ အရမ်းကို စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်မှာပဲ ”
ကျွန်တော်လည်း ဒေါသထွက်ထွက် နဲ့ ကရားရေလွှတ် တတွတ်တွတ် တလစပ် ပြောပစ်လိုက်တယ်..။ အကိုကတော့ ဘာပြန်ပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူးနဲ့ တူပါရဲ့..။ ဖုံးကို ဆောင့်ကြီးအောင့်ကြီး ချသွားခဲ့တယ်..။
အဲဒီနေ့ညက စလို့ သားသမီးနဲ့ မိဘ ဆိုင်ရာ အချစ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် စမ်းစစ်မိလာခဲ့တယ်..။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောရရင်တော့ လူတိုင်းပြောပြောနေတဲ့ အချစ်ဆိုတာကိုပါ တစွန်းတစ သိလာခဲ့တော့တယ်..။
လူတွေဟာ ကိုယ်ဘာမှ မပေးဆပ် မစွန့်လွှတ်ရဘဲ ချစ်ကြောင်း ပြခွင့်ရရင် သိပ်ချစ်တတ်ကြပြီး ကိုယ့်အချစ်ကို ပြဖို့ နည်းနည်းလောက် ကိုယ့်မှာ အထိအခိုက်လေး ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပဲ.. တီကောင်ဆားတို့သလို တွန့်သွားတတ်ကြတယ်..။
Posted by navana at 1:50 PM
အဖေနဲ့အမေကတော့ ရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်ကြီးမှာ အတော့်ကို နေပျော်နေကြတယ်..။ နေရတာက အရာရှိတိုက်ခန်း..။
အိမ်ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးက ထင်းထင်းလင်းလင်း..။
သားလုပ်သူနဲ့ ချွေးမက အပတ်စဉ်ရုံးပိတ်ရက်ဆို မြေးဦးနဲ့ လာလည် ဆိုတော့ အထူးသဖြင့် အမေ ပျော်မဆုံးပေါ့..။
သမီးလေးကလည်း အတော့်ကို တီတီတာတာ လုပ်တတ်နေပြီဆိုတော့ အဘိုးအဘွား သဲသဲလှုပ်ပြီပေါ့..။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့လဲ အဝေးမှာ နေစဉ်လိုမဟုတ်ဘဲ မိဘတွေနဲ့ မပြတ်တွေ့နေရတော့ အရင်ကထက်ပိုပြီး ကြည့်ရှု ပံ့ပိုးခွင့်ရတယ်..။
မဒမ်မသိအောင် တမျိုး.. သိအောင်တဖုံ ပေးရကမ်းရတာလဲ အမော..။
ကျွန်တော့်မိဘတွေကို ထောက်ပံ့ပေးကမ်းတာ မဒမ်က သိပ်ကြီး ပိတ်ပိတ်ပင်ပင်လုပ်လို့လားဆိုပြန်တော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး..။
မယူခင်ကတည်းကလည်း မိဘတွေကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ဖို့ ကျွန်တော့်မှာ တာဝန်အပြည့်ရှိနေကြောင်း သူသိခဲ့တာမို့ တခါတရံ သူကတောင် လိုလိုလားလား ဦးဆောင် ကန်တော့တာမျိုး လုပ်တတ်တယ်..။
ဒါပေမယ့် တချို့ကိစ္စတွေကို မိန်းမ ပေးမသိတာက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားတွေရဲ့ ထုံး နှလုံးမူပြီး ကျွန်တော် မပြောဘဲ နေခဲ့တယ်..။
လစဉ်ဝင်ငွေထဲက ဖဲ့ရွဲ့ပြီး အမေတို့ကို ပေးတာ ဘာပြသာနာမှ မတက်ပေမယ့်.. နှစ်ကုန်ဆုကြေး (year end bonus ) ရတဲ့အခါမတော့ ယောက္ခမနဲ့ ချွေးမ ပဋိပက္ခလေးတွေ ပေါ်လာခဲ့တော့တယ်..။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် စက်ရုံရဲ့ အခြေအနေကလည်း ကောင်းတော့ အရင်နှစ်တွေနဲ့မတူ ဆုကြေးက မြိုးမြိုးမျက်မျက် ရတယ်..။
တသက်နဲ့တကိုယ် တခါမှ မကိုင်ခဲ့ရဖူးတဲ့ သိန်းဆယ်ဂဏန်းလောက် ရတာဆိုတော့ ရတဲ့ငွေကို ဝေပုံချလိုက်တယ်..။ မဒမ့်အတွက် .. အမေ့အတွက်..
မဒမ့်အတွက်ကတော့ အများဆုံး..။ သူ့ဝေပုံထဲမှာ အိမ်ထောင်စားရိတ် ကလေးစားရိတ်တွေလည်း ပါတော့ ပိုပေးရမှာပဲလေ..။
အမေက ဒုတိယအများဆုံး..။ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ အသေးသုံးဘာညာသာတကာ သုံး ဖို့ နည်းနည်းပဲ ချန်ထားလိုက်ပါတယ်..။ ဘတ်ငွေပေါ့..။
အဲသလို ခွဲခြမ်းပြီး သကာလ အမေ့အတွက် ပိုက်ဆံအထုပ်လိုက် ကိုင်ပြီး လင်မယားနှစ်ယောက် ရွှေဂုံတိုင်ကို ပျော်ပျော်ကြီး ချီတက်ခဲ့ကြတယ်..။
ဒါက အမေ့အတွက်ဆိုပြီး အားပါးတရ ငွေထုပ်ချ ကန်တော့တော့ ပေးလိုက်တဲ့ဆုတွေဆိုတာ တတွတ်တွတ်နဲ့ အမေ ပြုံးပြုံးကြီး ရွတ်နေတာ တော်တော်နဲ့ မပြီးတော့ဘူး..။
ဒါပေမယ့် အမေ့အပျော်က သိပ်တော့ကြာရှည်မခံပါဘူး..။ ကန်တော့ခံငွေကို သိမ်းရင်း ဆုကြေးက ဘယ်လောက်တောင် ရလဲ လို့ အမေ မေးလာတာနဲ့ ၀မ်းသာအားရ ကျွန်တော်ရတဲ့ ဆုကြေးအမှန်ကို ပြောလိုက်မိတယ်..။ အော်..
အဲဒီလောက်တောင် ရတာလားလို့ ခပ်လေးလေး ပြောရင်း အမေ့မျက်နှာ ကွက်ကနဲ ပျက်သွားတာကို ကျွန်တော်ဖျတ်ကနဲ မြင်လိုက်ရတယ်..။
ကျွန်တော်ရတဲ့ bonus ပမာဏ နဲ့ သူရတာကို ချင့်တွက်ပြီး အရနည်းတယ်လို့ အမေထင်ဟန် ရှိပါရဲ့..။ မိသားစုထဲမှာ ဒီသားတစ်ယောက်ပဲ ထူထူထောင်ထောင် ရှိတော့ ကျွန်တော့်အပေါ်ထားတဲ့ အမေ့မျှော်လင့်ချက်က မသေးဘူး..။
ကျွန်တော်အိမ်ထောင်ကျသွားသည့်တိုင် .. အမေ့မသိစိတ်မှာ.. လူပျိုလူလွတ်သားတစ်ယောက်က မိဘကို ထောက်ပံ့ကြည့်ရှုတာမျိုး လိုချင်နေခဲ့တယ်..။
လက်တွေ့မှာ မျှော်သလို မဖြစ်လာတော့ အမေ အ်ိနြေ္ဒိမဆောင်နိုင် ဖြစ်သွားခဲ့တယ်..။ ရိုးရိုးတွေး ရိုးရိုးစဉ်းစားတတ်တဲ့ မဒမ်ကတော့ အမေအဲသလိုဖြစ်သွားတာ သိတောင် မသိလောက်ပါဘူး..။ ကျွန်တော်ကသာ ကိုယ့်အမေအကြောင်း သိနေတာမို့ ရိပ်မိလိုက်တာ..။
လာတုံးက ပီတိတွေ တပွေ့တပိုက်နဲ့ လာခဲ့ပေမယ့် အမေ့ရဲ့ မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲ ဖတ်မိပြီး အပြန်လမ်းမှာ ကျွန်တော် ငြိမ်သက်နှုတ်ဆိတ်နေတော့ မဒမ်ကတောင် ပြောယူရတယ်..။ ကိုကြီး နေမကောင်းဘူးလား တဲ့..။
သူ့အမေးကို ကြားလိုက်ပေမယ့် အင်းမလုပ်အဲမလုပ် ကျွန်တော် နေလိုက်တော့တယ်..။ စိတ်ထဲမှာတော့ အတော့်ကို မကောင်းဖြစ်နေခဲ့တယ်..။
အဲဒီနေ့က စလို့ ဆယ်ရက် ဆယ့်ငါးရက်လောက် အမေတို့အိမ်ဖက် ခြေဦးမလှည့်မိတော့ဘူး..။
တစ်ပတ်မလာ နှစ်ပတ်မလာဆိုတော့ အဖေက မနေနိုင်ဘူး ထင်ပါရဲ့..။ ဒီတစ်ပတ်တော့ လာခဲ့ကြအုံးဆိုတာနဲ့ မဒမ်နဲ့ကလေးခေါ်ပြီး ကျွန်တော်အားတင်း ချီတက်ခဲ့ရပြန်တယ်..။ ဒါပေမယ့် ရောက်ရောက်ခြင်း အမေက အခဲမကြေတဲ့ စကား ပြောလာပြန်တယ်..။
ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်က အခြေအနေမှန်ကို မရိပ်မိတဲ့ မဒမ်က အိမ်ပေါ်ရောက်ရောက်ခြင်း အမေ ရွှေမ၀ယ်သေးဘူးလား လို့ စသလို လောကွတ်ချော် ရာက အမေ့ရဲ့ အကြိတ်အခဲ ရုတ်တရက် ပြန်ပေါ်လာတာပဲ..။
မဒမ့်အမေးကို ကျွန်တော့်မျက်နှာကြည့်ပြီး အမေပြန်ဖြေတယ်..။
“ တို့က အရိုးကိုက်ရတာပါအေ ” တဲ့..။
အဲဒီနေ့ကလည်း ကျွန်တော် စကားခွန်းတုန့်မဆို ခေါင်းငိုက်စိုက်ချပြီး ပြန်လာခဲ့မိတယ်...။
32.3 ဖုန်ထဲသဲထဲ ဖင်ခုထိုင် စာသင်ခဲ့တဲ့ လူငယ်တဦးရဲ. ကျေးဇူးတင်စကား
ဒီရက်ပိုင်း စေတနာရှင်များက အားစိုက်လှူဒါန်းထားတဲ့ ကိစ္စလေးတွေနဲ့ နည်းနည်း အလုပ်ရှုပ်နေလိုက်တယ်..။
ရွာကို ဖုံးဆက်.. လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်လေးတွေ တောင်း.. ပြန်ဖို့ စီစဉ်ပေါ့..။
ရွာကလူတွေကတော့ အံ့သြ၀မ်းသာ ဖြစ်နေကြတယ်..။ အခုလို.. ရွာအ၀န်းအ၀ိုင်း အပြင်ဖက်ကနေ ရွာကကလေးတွေအတွက် တခုတ်တရ လှူတယ်ဆိုတာ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ မဟုတ်လား..။
ရွာက လူတွေတင်မက.. အင်တာနက် လက်တကမ်းမှာ ရှိတဲ့ ရွာကလူတွေကိုပါ အပျော်တွေက ကူးစက် နေတယ်..။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်.. ကျွန်တော် လုပ်အားပေး ဆရာလေး လုပ်ခဲ့တဲ့ ရွာ ဇရပ်နှစ်ဆောင်ပေါ်က နေ တရုတ်ပြည်မှာ PhD ယူနေတဲ့ တပည့်လေး တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်ကို လာဖတ်ရင်း အလှူရှင်တွေကို ကျေးဇူးတင်စကား ဂျီတော့မှာ လာပြောတယ်..။
ကျွန်တော်ရေးခဲ့သလို.. မြေကြီးကိုမွေ့ယာလုပ် ဖုန်ထဲသဲထဲ ဖင်ခုထိုင် ပြီး ရွာကကျောင်းကလေးမှာ ငယ်စဉ်ဘ၀တွေ ကြိုးစားဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့ လူငယ်လေး တစ်ဦးပေါ့..။
မြန်မာပြည်ကနေ ဘီအီး ရပြီး.. တရုတ်ပြည်မှာ မာစတာ တက်ခွင့်သူရတယ်..။ အခုတော့ မာစတာ ပြီးသွားလို့ ဒေါက်တာဘွဲ့ယူဖို့ လုပ်နေတယ်..။ (ကံ့ကူလက်လှည့် ငယ်ဆရာက တော်တော့ သူတို့ တော်တာပေါ့ .. ဟဲဟဲ)
သူရဲ့ ဂျီတော့က တဆင့်ပြောလာတဲ့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေးကို (သူ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပဲ) အလှူရှင်တွေနဲ့ တကွ ဘလော့ဂ်ကြွလာ ဆွေသဟာများ ကြည်နူးပါစေကြောင်း မျှဝေလိုက်ပါတယ်..။
“kthihacn: ဟုတ်...ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို့ ပြောလိုက်ပါ အုံး...မြေကြီးကို မွေ့ယာလုပ်၊ ဖုန်ထဲသဲထဲ ဖင်ခုထိုင်ပြီး စာသင်လာတဲ့ သူတယောက်က ပြောတယ်လို့”
မိသားစုအကြောင်း ခနထားပြီး သူငယ်ချင်းများအကြောင်း ပြောအုံးမှ..။ ဒီသူငယ်ချင်းတွေ အကြောင်းကလဲ မကုန် မကုန်နိုင်ဘူးလို့ တော့ မထင်ကြပါနဲ့..။ တကယ်လည်း မကုန်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်ဗျာ..။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက် က အလုပ်ကိစ္စလေး တခုနဲ့ တရုတ်ပြည်သွားတယ်..။ တရုတ်ပြည်ကအပြန် ဘန်ကောက်လေဆိပ်မှာ.. လေယာဉ်က ပုံမှန်ထွက်ရမယ့်အချိန်မထွက်နိုင်ဘဲ.. ခရီးသည် တစ်ယောက် ကျန်နေလို့ တနာရီလောက် နောက်ကျပြီးမှ ထွက်တယ်..။
ကျွန်တော်နဲ့ အတူပါလာတဲ့ သူငယ်ချင်းက “ ဘယ်မအေပေး စောင့်နေရတယ် မသိဘူး ” လို့ မအောင့်နိုင် မအီးနိုင် ရေရွတ် တဲ့အချိန် အရပ်ရှည်ရှည် ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း ဘဲတပွေ အိပ်ကြီးအိပ်ငယ် အသွယ်သွယ်နဲ့ လေယာဉ်ပေါ် တက်လာတယ်..။
အားလုံးက သူ့ကို ၀ိုင်းပြီး မေတ္တာပို့တဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြိုဆိုကြတယ်..။ သူကတော့ အေးဆေးပဲ..။ သူနောက်ကျလို့ အားလုံးက စောင့်နေရတာကိုတောင် မသိတဲ့ အထာနဲ့ ကုလားမင်းသား စလိုးမိုးရှင်း လျှောက်သလိုမျိုး လျှောက်ဝင်လာတယ်..။
ကျွန်တော်လည်း ဒီကောင် ငါမြင်ဖူးပါတယ်လို့ တွေးနေတုံး.. သူကပဲ “ ဟ ဆီမီးခုံ ” လုိ့ ၀မ်းသာအားရ ထအော်တယ်..။ ကျွန်တော်လည်း “ ဟ သူကြီး .. သင်္ဘောကဆင်းလာတာလား ” လို့ ပြန်နှုတ်ဆက် မိတယ်..။
အခုနက ဘယ်မအေပေး စောင့်နေရတယ် မသိဘူး ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းက.. “ အော် လက်စသတ်တော့ မင်းသူငယ်ချင်းကိုး ” လို့ ၀င်ပြီး မှတ်ချက်ချတယ်..။
နောက်မှ သိရတာက.. Boarding Pass ပျောက်သွားလို့ ကြာနေတာတဲ့..။ သူကြီး က ရွှေဘိုသား..။ လူတစ်ဖက်သားကို ချိုးချိုးနှိမ်နှိမ် ပြောရမယ်ဆို.. သူ့မီအောင် ပြောနိုင်တဲ့ သူ မရှိလောက်ဘူး..။ ဟာသ လည်း အတော်မြောက်တဲ့ ကောင် ပေါ့..။
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတတွေ ဆုံရင် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မှိုချိုးမျှစ်ချိုး ပေါက်တတ်ကရ လုပ်ကြံဇာတ်ခင်း ပြီး ရစရာလုံးဝ မရှိအောင် နှိပ်ကွပ်လေ့ ရှိတယ်..။ အဖေတွေရော အမေတွေရော မိန်းမတွေရော.. ဘာမှ မကျန်အောင်.. နိုင်ပြီးရော ပြောကြတာပဲ..။
အဲသလိုမျိုး ပြောခဲ့ဆိုခဲ့ကြတာ.. ကျောင်းကတည်းဆိုတော့.. နာရကောင်းမှန်း မသိကြတော့ပါဘူး..။ ဒီအဖွဲ့ ဒီသူငယ်ချင်းတွေက ဒီလိုပဲ ပြောတတ်ကြတယ်လို့ အားလုံးက လက်ခံထားလိုက်ကြတော့တယ်..။
ဘီလူးဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း သင်္ဘောသားပဲ.. ။ သူကြီးလိုမျိုး ပေါ့..။ ဘီလူးကတော့ ညောင်ဦးသား..။ ထုံးစံအတိုင်း နာမည်ရင်းတွေ ပျောက်ပြီး နာမည်ပြောင်တွေပဲ တွင်ကျန်နေခဲ့တော့တယ်..။ ဘီလူး မင်္ဂလာဆောင်တော့ သူကြီးကို ဖိတ်တယ်..။
ဖိတ်စာလေး ပေးပြီး သူကြီး ငါ့မင်္ဂလာဆောင် လာဖြစ်အောင် လာနော်လို့ ဘီလူးကပြောတယ်..။ ဟ လာမှာပေါ့ ဘီလူးရ လို့ သူကြီးက ပြန်ပြောတော့.. “ လူချည်းတော့ မလာခဲ့နဲ့ လက်ဖွဲ့ပါ ယူခဲ့ ” လို့ ဘီလူးက ထပ်ပြောတယ်..။
သူကြီးက “ ဟ. . ခွေးဖင်ပူးတာ လက်ဖွဲ့ ပေးဖို့ မလိုပါဘူး ” လို့ ပြောပြီး တဟားဟား နဲ့ အော်ရယ်တော့တာပဲ..။
ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းတတွေက.. အဲသလိုမျိုး..။ ကြုံရင်ကြုံသလို နှိပ်ကွပ်တာ..။
သူကြီး ရဲ့ သားလေးမွေးတော့.. သူကြီးက သင်္ဘောလိုက်နေတယ်..။ သူကြီးမိန်းမ ကလေးမွေးပြီ လို့ ကြားတော့ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတတွေ.. သတင်းသွားမေးကြမယ် ဆိုပြီး တိုင်ပင်ကြတယ်..။ ဘီလူးက “ အခု မသွားကြနဲ့အုံး.. သူငယ်ချင်းတို့ .. ကလေးက.. လူနဲ့မတူသေးဘူး ” လို့ အရွှန်းဖောက်တယ်..။
ဘီလူးက အဲသလိုမျိုး ကွယ်ရာမှာ ပြောတာကို သူကြီးသင်္ဘောက ဆင်းလာတော့ ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေက ၀ိုင်း ပြောကြတယ်..။
ဒီကောင်က ဒီလိုပြောသတဲ့လား.. နေနှင့်အုံးပေါ့.. ဒီကောင့်သမီး တက်နေတဲ့ ဒဂုံ(၁) ကို ငါရောက်အောင်သွားပြီး ဒီကောင့် ငယ်ကျိုးငယ်နာတွေ ဖော်ပစ်မယ်လို့ သူကြီးက ဘီလူးကို ပြန်ကြိမ်းတယ်..။ ဘီလူးမှာ သမီးလေး တစ်ယောက်ရှိတယ်..။
အဲဒီသမီးလေးကို.. ဒဂုံ(၁) မှာ ထားတယ်..။ လေးငါးတန်းတော့ ရောက်ပြီ ထင်ပါရဲ့..။
သူကြီးက ဘီလူးနဲ့ တွေ့တိုင်း အမြဲပြောတယ်..။ “ မင်းတို့က မမွေးခင်တုံးကတော့ လင်ရောမယားရော သံချွန်မီးဖုတ်ထိုးမလို့ လုပ်ပြီး.. အခုမှ ဒဂုံ(၁) ထားရတာနဲ့ အ်ိမ်က ကားနဲ့ အကြိုအပို့ လုပ်ရတာနဲ့.. သိပ်ချစ်ပြနေကြတယ်.. ကလေးမလေးကို ငါ တစ်ရက် အဲဒီအကြောင်းတွေ ဖော်ကောင်လုပ်အုံးမယ် ” တဲ့..။
အဲဒီအကြောင်း ပြောရင် ဘီလူး ငြိမ်သွားတော့တာပဲ..။
နောက် ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲက တစ်ကောင် ရှိသေးတယ်..။ သူက အခုထိ လူပျိုကြီး..။ သူ့ရည်းစားက အသက်သူ့ထက်ကြီးတယ်..။ သမီးရည်းစားတို့ ဘာသာဘာဝ သူတို့ ချိန်းတွေ့ကြတာကို သူကြီးက လည်ပြောတယ်..။
“ သူတို့ ချိန်းတွေ့နေတာတော့ မင်းတို့ သွားမချောင်းကြနဲ့နော်.. တခြား သမီးရည်းစားတွေ လို ကယုကယင် ချစ်တင်းနှောနေတာ တော့ တွေ့ရမှာ မဟုတ်ဘူး..။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဆံပင်ဖြူတွေ နှုတ်ပေး နေတာ နဲ့ အံကပ်တွေ ဖြုတ်ဆေး နေတာပဲ တွေ့ရမှာ ” တဲ့..။
စနေကျ ပြောနေကျ နောက်နေကျ သူငယ်ချင်းတွေ ဆိုတော့လည်း ကာယကံရှင် ခမျာ စိတ်မဆိုးနိုင် ပါဘူး..။ ကိုယ့်အလှည့်ကျ မနွဲ့စတမ်း ဆိုတာမျိုး ပေါ့..။ တကွေ့မကြုံ တကွေ့ကြုံမှာပေါ့ သူကြီးရာ လို့ တေးမှတ်ထားကြတယ်..။
သူကြီး မိန်းမ မရခင် ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ ဖြစ်တော့ ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်းများက ၀ိုင်းမေးကြတယ်..။ ခင်ဗျားတို့ လွန်လွန်ကျွံကျွံတွေ ဖြစ်ကုန် ပြီမဟုတ်လား လို့..။
ကျွန်တော်တို့ ဘာသာ အလိုအရ.. နေကာရ် (မွတ်ဆလင် အလို) မလုပ်ဘဲ.. သူများသားသမီးကို အဲသလိုလုပ်ရင် ကျွန်တော့်အဖေ ခွေးဖြစ်သွားမှာ ပေါ့ လို့ ရုပ်တည်ကြီး နဲ့ ပြောပြီး သူကြီးက ဇွတ်ပေငြင်းတယ်..။
အဲဒါကို အံကပ်တွေဖြုတ်ဆေး.. ဆံပင်ဖြူတွေ နှုတ်ပေး လို့ အပြောခံရတဲ့ တစ်ယောက်က “ ဟ သူကြီး ရွှေဘို အိမ် ဖုံးဆက်ကြည့်လိုက်အုံး.. ခင်ဗျားအဖေ ဖုံးလာကိုင်လို့ ပါပါးလား လို့ ခင်ဗျားမေးရင် ဟိုဖက်က ၀ုတ်ဝုတ် လို့ ထူးနေအုံးမယ် ” တဲ့..။ ၀င် ပြောတယ်..။
MIT မှာတုံးက သူကြီးရဲ့ အခန်းဖော်က ဂျီတီ..။ ဂျီတီက သရဲ တအားကြောက်တတ်တယ်..။ ကျွန်တော်တို့ တာမွေဖက် အခန်းငှားနေတုံးက ဂျီတီနဲ့ ကလေး ရန်ဖြစ်ကြတယ်..။ အခန်းက ကျွန်တော်တို့ ကလေးတို့ စုငှားထားတဲ့ အခန်း..။
ဂျီတီက ခဏလာနေတာ..။ အခန်းရှင် ကလေး နဲ့ ရန်ဖြစ်မှတော့ “ မင်းတို့အခန်း ငါမနေဘူး ဆင်းမယ် ” ဆိုပြီး ကျောပိုးအိပ်တလုံးထဲ အ၀တ်တွေထိုးထည့်ပြီး ဂျီတီ ဆင်းသွားတယ်..။
ရန်ဖြစ်တာက ညဆယ်နာရီလောက်..။ ထိုးကြကြိတ်ကြ နဲ့ ကွဲပြဲတဲ့အထိ ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေး ဖြစ်သွားပေမယ့် ဂျီတီ အခန်းက စိတ်လိုက်မာန်ပါ ဆင်းသွားတော့ ကလေး ကစိတ်မကောင်းဘူး..။
တားဖို့ကျတော့လဲ ရန်ဖြစ်ထားတဲ့ အရှိန်က မကုန်တော့.. ပြောမထွက်ဘူး ပေါ့လေ..။
ကျန်တဲ့ သူငယ်ချင်းများကတော့ ကလေးကိုပဲ ၀ိုင်း အပြစ်တင်ကြတယ်..။ ညကြီးမင်းကြီး ဂျီတီ ဘယ်သွားအိပ်မလဲ.. ဒီအချိန်ကြီး ဆင်းသွားတာ.. ဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့ နဲ့ တယောက်တပေါက် ကလေးကို ကောင်းချီးပေးကြတယ်..။
ဒါပေမယ့် ပြောလို့မှ ကျွန်တော်တို့စကားမဆုံးသေးဘူး..။ ဂျီတီ ပြန်ရောက်လာတယ်..။ ကလေးကို စိတ်ပြေသွားလို့ ပြန်လာတာ မဟုတ်ဘူး..။ မီးကပျက်နေတဲ့ အပြင် လမ်းထိပ်မှာ ခွေးတွေ သူ့ကို ၀ိုင်းဟောင်တော့ နဂိုရ်ကမှ သရဲ တအားကြောက်တတ်တဲ့ ဂျီတီ အခန်းပြန်ပြေးလာတယ်..။
ဂျီတီသရဲ ကြောက်ချက်ကတော့ သူ့အခန်းဖော် သူကြီးကိုတောင် သရဲထင်ပြီး အဆောင်ဝရံတာက ခုန်ချဖို့ လုပ်ဖူးသေးတယ်..။
အဲဒီတုံးက သူကြီးက မန္တလေး မိန်းထဲ စတိတ်ရှိုးသွားကြည့်မယ် .. ညပြန်မအိပ်ဘူး လို့ ဂျီတီကို ပြောပြီး မိန်းထဲ လစ်သွားတယ်..။
ဂျီတီလည်း သူကြီး ည ပြန်လာမှာ မဟုတ်ဘူး အထင်နဲ့ ခပ်စောစောပဲ အခန်းတံခါးတွေ ပိတ်ပြီး အိပ်လိုက်တော့တယ်..။
ဖြစ်ချင်တော့ စတ်ိတ်ရှိုးပွဲက မလုပ်ဖြစ်ဘူး..။ သူကြီး ပြန်ရောက်တော့ ဂျီတီက အိပ်နေပြီ..။ သူကြီးလည်း ဂျီတီ့ကို မနိုးချင်တော့တာနဲ့ တဖက်ခန်းဝရံတာက ကျော်ခွပြီး အခန်းထဲ ၀င်အိပ်နေလိုက်တော့တယ်..။
ကျွန်တော်တို့ MIT အဆောင် ၀ရံတာတွေက တခန်းနဲ့တခန်းဆက်နေတာ ဆိုတော့ ကျော်ခွ ၀င်လို့ လွယ်တယ်..။
သူကြီး အဲသလို ကျော်ခွဝင်ပြီး ပြန်လာအိပ်တာကို မသိတဲ့ ဂျီတီ .. တရေးနိုးတော့ .. သူကြီးခုတင်ပေါ် လူတစ်ယောက် တွေ့လိုက်ရတော့ ခေါင်းနပန်း အတော်ကြီးသွား ခဲ့တယ်..။
အသံလည်း မထွက်ရဲ.. ဇောချွေးတွေကပြန်.. အော်ဟစ်ထွက်ပြေးဖို့ ကလည်း မ၀ံ့..။ နောက်ဆုံး အရဲစွန့်ပြီး တခုခုလုပ်ဖို့ ဂျီတီ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်..။
သူအိပ်နေတဲ့ ခေါင်းအုံး နဲ့ လှမ်းပစ်ကြည့်မယ်.. လူဆိုရင် အသံထွက်မှာပဲ၊ သရဲ ဆိုရင်တော့ လှုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး လို့ တွေးပြီး ဂျီတီ သူကြီးကို ခေါင်းအုံး နဲ့ လှမ်း ပေါက်တယ်..။
ဖြစ်ချင်တော့ ပစ်လိုက်တဲ့ ခေါင်းအုံး ထောင့်စွန်းက သူကြီး မျက်လုံး သွားမှန်တယ်..။ နာလည်း နာ အောင့်လည်း အောင့် အိပ်ချင်မူးတူး နဲ့ ဆိုတော့ သူကြီး ဘယ် အသံထွက်နိုင်မလဲ..။ အဲဒါကို ဂျီတီ က တကယ့်သရဲ ပဲလို့ ထင်သွားတော့တယ်..။
ပုဆိုးတောင် မ၀တ်နိုင်ဘူး .. သရဲသရဲ နဲ့ အော်ပြီး ၀ရံတာထွက်ပြေးပြီး ခုန်ချဖို့ လုပ်တော့တာပဲ..။
သူကြီးလည်း အဲဒီတော့မှ.. ပျာယာခတ်ပြီး “ ဂျီတီ ငါပါဟ.. သူကြီးပါ.. သရဲ မဟုတ်ပါဘူး ” နဲ့ အတင်းလိုက်ဆွဲရတယ်..။ ဒါတောင် ဂျီတီက ငါ့နားမလာနဲ့နော်.. ငါခုန်ချလိုက်တော့မယ် လုပ်နေသေးတယ်..။ နောက်မှ.. သူကြီးမှန်းသိသွားတယ်..။
ဂျီတီက အဲသလောက် သရဲကြောက်တာ..။
Posted by navana at 10:16 AM
ဂျီတီက သရဲ သာ ကြောက်တာ..။ ကျန်တဲ့ ဖက်အားလုံးမှာတော့ ထူးချွန်တယ်..။ သီချင်းဆိုလည်း အတော်ကောင်းတယ်..။ ဇော်ဝင်းထွဋ်သီချင်း တွေ သူဆိုရင် နားထောင်လို့ အတော့်ကို နားဝင်ပီယံ ဖြစ်တယ်..။ အသံ ကိုယ်နှိုက်ကိုက အနုပညာ မြောက်တယ်..။
ရုပ်ကတော့.. ပြောခဲ့သလို.. ဓါးခုတ်ကောင်ပေါင်နဲ့ကောင်ပဲ.. ဟဲဟဲ.။ လိပ်နင်ဂျာနဲ့လည်း တူတယ်လို့ သူကြီးကတော့ ဂျီတီကို မကြာခဏ ချီးမွမ်းတယ်..။
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ အချင်းအချင်း အတင်အစီး မရှိ.. အကျော်အခွမရှိ.. စိတ်ရင်းအင်မတန် ကောင်းပြီး သူငယ်ချင်းများရဲ. အနွံအတာ ကို အငြီးအညူ မရှိ ခံတဲ့ သူကို မီးမြှင့်တယ်လို့ ပြောလေ့ ရှိတယ်..။ ဂျီတီက အဲသလို သူငယ်ချင်းမျိုးပဲ..။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံကြုံတိုင်း သောက်စားသမျှ ဒိုင်ခံ ရှင်းဖို့ပဲ အမြဲတွေးနေတတ်တဲ့သူ..။ သူ့အလှည့် ကိုယ့်အလှည့်ဆိုတာ.. စိတ်ထဲကို မထားတဲ့ သူပဲ..။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပေါင်းလာခဲ့သူတွေဆိုတော့.. ဘယ်ကောင်က ဘယ်လို စိတ်ဆိုတာ.. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နှောကျေ နေကြပါပြီ..။
နေတာထိုင်တာကတော့ ကျွန်တော်နဲ့ နင်လားငါလားပါပဲ..။ ကျောင်းအဆောင်မှာ နေတုံးကလဲ တအားဖြစ်သလို နေတာပဲ..။ ဂျီတီရဲ. ခြင်ထောင် ထောင်နည်း ဆိုတာ ကျောင်းမှာ မှတ်မှတ်သားသား ပြောကြတဲ့ အထိ ပေါ့..။ စာသင်နှစ် တစ်နှစ်မှာ ဂျီတီက ခြင်ထောင်ကို တစ်ကြိမ်ပဲ ထောင်တယ်..။ ကျောင်းဖွင့်လို့ ကျောင်းရောက်ရောက်ခြင်း တကြိမ် .. ပါလာတဲ့ ခြင်ထောင်ကို ထုတ် ကုတင်မှာ ချည်တုပ် ထောင်ထားလိုက်တယ်..။
ကျောင်းတွေပိတ်ပြီ ဆိုတာနဲ့.. နေရပ်ပြန်ဖို့ .. ပစ္စည်းတွေ သိမ်းတော့မှ.. သူ့ခြင်ထောင်ကို ပြန်ဖြုတ်.. သေတ္တာထဲ ပြန်ထည့် လိုက်တော့တယ်..။
ဒီကြားထဲကတော့.. သူ့ကုတင်ပေါ်မှာ ခြင်ထောင်ကြီးက အမြဲတမ်း ထောင်ရက်ပဲ တွေ့ရမယ်..။ တနေ့တခါ အတင်အချ လုပ်ဖို့ ဝေးလို့.. တစ်နှစ်တစ်ခါတောင် ကျောင်းပိတ်သွားလို့ လုပ်တာ..။
သူ့ခြင်ထောင်သာ အဲသလိုမျိုး အပျင်းထူတာ..။ သူကြီးရဲ. ခြင်ထောင်ကိုတော့ အပင်ပမ်းခံ မဟုတ်တရုတ် လုပ်တယ်..။
သူကြီး မူးပြန်လာမယ့် ညမှာ.. ဂျီတီက သူကြီးခြင်ထောင်ကို ပြောင်းပြန်ထောင်ထားလိုက်တယ်..။ မူးမူးရူးရူး နဲ့ ပြန်လာတဲ့ သူကြီး.. အိပ်ရာထဲဝင် အိပ်ဖို့ ခြင်ထောင်ကို လှပ်တယ်..။ ဂျီတီက ပြောင်းပြန်ထောင်ထားတော့ အပေါက်က အမိုးရောက်နေတယ်..။
မူးကမူး.. ခြင်ထောင်က အပေါက်ရှာမရ နဲ့ သူကြီးခမျာ ရွာတွေ လည် နေတာပေါ့..။ ဂျီတီကတော့ တဖက်ကုတင်ကနေ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ကြိတ်ရယ်နေခဲ့တယ်..။
ဂျီတီက အဲသလိုမျိုး..။ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်း ကို follow လိုက်ရမယ်ဆိုလဲ သူ့အပြင် မရှိဘူး..။
အခု စင်ကာပူမှာ လင်ရောမယားရော ရောက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ရှိတယ်..။ ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူက ကျွန်တော်တို့ ဂျီတီတို့နဲ့ အတန်းတူ.. same batch ပေါ့..။ သူ့အမျိုးသမီးက ကျွန်တော်တို့ထက် တတန်း ငယ်တယ်..။
အဲဒီကောင်မလေးရဲ. အချစ်ကို ရဖို့ ကြိုးစားနေစဉ်.. ဂျီတီကို .. အဲဒီသူငယ်ချင်းက ပြောလာတယ်..။ “ဂျီတီ ကိုယ်တို့ နှစ်ယောက် ကိစ္စပြီးသွားပြီ ” ပေါ့..။
“ ဟ.. အဲဒါကောင်းတယ်.. အဲဒီသောက်ကောင်မ ပဲကိုများတယ် ပစ်ထားလိုက် ” လို့ ဂျီတီလည်း ချက်ခြင်းပဲ follow လိုက် ကောင်းချီးပေးတယ်..။
ဟိုက ပြောတဲ့ ကိစ္စပြီးသွားပြီ ဆိုတာက အဆင်ပြေသွားပြီလို့ ပြောတာ..။ ဂျီတီက.. ဇာတ်လမ်းပြတ်သွားပြီ အထင်နဲ့ မစဉ်းမစား follow လိုက်ပစ်လိုက်တာ..။
“ ဟ.. အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေ ဂျီတီ.. ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ အဆင်ပြေသွားပြီလို့ ပြောတာ ” လို့ ဟိုတစ်ယောက်လည်း ပျာပျာသလဲ ရှင်းချက်ထုတ် ကြွားရတယ်..။
ဂျီတီကတော့ “ ဟ.. အဲဒါလည်း ကောင်းတာပဲ ” လို့ ချက်ခြင်း ထပ် follow လိုက် ပြောပြန်တယ်..။
ဂျီတီဆိုတာ.. အဲသလိုမျိုး ကောင်.။
ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ထဲမှာ မြန်မာ့မီးရထားမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဇော်ကြီး ဆိုတဲ့ လယ်ဝေးသား လဲ ပါတယ်..။ ကျောင်းပြီး အလုပ်အစောဆုံး ရတဲ့ သူငယ်ချင်း တွေထဲမှာ သူက ထိပ်ဆုံးကပေါ့..။ ကျွန်တော်တို့က ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင်ဖြစ်နေချိန် သူက အလုပ်ဝင်ဖြေပြီး တခါတည်း တန်းအောင်သွား ခဲ့တယ်..။
ရတော့ လည်း officer level လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ အနေနဲ့ အရာရှိပေါ့လေ..။ မနက်မနက် ၀တ်စုံပြည့်နဲ့ မောင်းမင်းကြီးသားက ခေါင်းမော့ ရင်ကော့နဲ့ အလုပ်သွားရင် ကျန်တဲ့ကောင်တွေကတော့ ပေါက်သင်ညိုခေါင်းထု ထားသလိုမျိုး.. ငေးငေးငိုင်ငိုင် အူတူတူနဲ့ ကျန်ခဲ့ကြရတယ်..။
ဇော်ကြီးက အရပ်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း လူကောင်ကြီးကြီး .. မျက်မှန်ကထူထူ.. သူတို့မီးရထား ယူနီဖောင်း အဖြူရောင်နဲ့ အတော့်ကို ကြည့်ကောင်းတာ..။ တိမ်ဦးလေပြေ မောင့်ကိုစေ ရုပ်ရှင်ထဲက ၀င်းဦးလိုလို ဘာလိုလို..။ ကုလား ၀င်းဦး စတိုင်ပေါ့..။ ဇော်ကြီးက အသားတော့ ညိုတယ်..။
တခါတလေ သူက အလုပ်သွား.. ကျွန်တော်တို့ကလဲ မြို့ထဲသွားဖို့ ကြုံလာ လို့ ဘတ်စ်ကား အတူစီးမယ် အတွေးနဲ့ “ ဇော်ကြီး အတူသွားကြတာပေါ့ ” လို့ ပြောမိရင် “ သူငယ်ချင်းတို့ ကိုယ်တို့အရာရှိတွေက ယူနီဖောင်းနဲ့ ဘတ်စ်ကား မစီးရဘူး .. သူငယ်ချင်းတို့ ဖာသာ စီးကြပါ ” လို့ ပြန်ပြောပြီး Taxi နဲ့ သူဒိုးတယ်..။
ကျွန်တော်တို့မှာ အောင့်သက်သက်နဲ့ ပေါ့..။ ဒါပေမယ့် နောက်မှ သိရတာက အရာရှိယူနီဖောင်းနဲ့ ဆိုက်ကားမစီးရ ဘတ်စ်ကားမစီးရ ဘူး ဆိုပဲ..။
ဇော်ကြီးက အခုအချိန်အထိ လူပျိုကြီး..။ လူပျိုသိုးကြီးပေါ့..။ မိန်းမလဲ ရမယ်မထင်တော့ပါဘူး..။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ မိန်းမ မရ.. ယောက်ျားယူပစ်ကွာ လို့ တွေ့တိုင်း ဟာသလုပ်ကြတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ အဲသလိုပြောတိုင်း သူ့မျက်လုံး ခပ်ပြူးပြူးကို အသားကုန် ထပ်ပြူးပြီး ဆဲတော့တာပဲ..။
သူကြီးက သူ့ကို နာမည်ပေးထားတယ်.. ။ A Man With Prawn Eye တဲ့..။ ပုဇွန်မျက်လုံးနဲ့ လူပေါ့..။ ဟားဟား..။
မိန်းမသာ မရသေးတာ..။ တစ်ယောက်ထဲ မတ်တပ်အိပ် လေးဘက်ထောက် ထိုင်နေရတယ် ဆိုတဲ့ လူမျိုး..။ အမြဲတမ်း ပြတ်လပ် နေတာပဲ..။ သူငယ်ချင်းတွေ ဆုံကြလို့.. သောက်ကြစားကြ .. ကာရာအိုကေ သွားကြတိုင်း.. တို့ကတော့ အောက်ပြုတ်ဆိုပြီး လိုက်လိုက်လာတယ်..။
(အောက်ပြုတ်ဆိုတာ.. ဖဲစကား နဲ့ ပြောတာ.. ရှိုးရိုက်ရာမှာ.. နောက်ထပ်လိုက်စရာ ပိုက်ဆံ မရှိတော့တဲ့ အခြေအနေကို ပြောတာပဲ )
စားသောက်ဆိုင် ပိုက်ဆံရှင်းတော့လည်း သူနဲ့မဆိုင်သလို နေတယ်..။ ကာရာအိုကေ မှာ ဘီလ်တောင်းတော့လဲ.. အသံမထွက်ဘူး..။ အဲ.. အားလုံး သောက်စားပျော်ပါးပြီးလို့ အိမ်အပြန်လမ်းမှာ တစ်ယောက်ယောက်က ကွမ်းယာလေးတော့ ၀ါးကြအုံးစို့ ဆိုတဲ့ အသံကြားလို့ကတော့ ဇော်ကြီးက သူ့အိပ်ထောင်ထဲ လက်နှိုက်ပြီး ဒေါကြီးမောကြီး နဲ့
“ သူငယ်ချင်းတို့ ငါလဲ အလှည့်လေးပေးကြပါအုံး မင်းတို့ချည်း ရှင်းနေတာ ” လို့ ပြောပြီး ကွမ်းယာဖိုး အတင်း လုရှင်းတော့တာပဲ..။
နောက်ဆုံးတော့ ငါပဲ ရှင်းလိုက်ရတာ .. ဆိုပဲ..။
တက္ကသိုလ်မှာ.. အတူတက်ကြစဉ်က သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘ၀ တွေ သိပ်မကွာလှ ဘူး ထင်ရပေမယ့်.. ကျောင်းပြီးလို့ ကိုယ်စီကိုယ်စီ လမ်းရွေးချယ် လျှောက်လှမ်းကြတာ ဆယ်နှစ် ဆယ့်ငါးနှစ်ကြာ တဲ့အခါမှာတော့ .. ကွာတဲ့ဘ၀တွေ တအား ကွာသွားခဲ့တယ်..။
တချို.က အရမ်းအရမ်းကို အဆင်ပြေသွားတဲ့အချိန်မှာ တချို.ကတော့ ပုံမှန်လေး.. တချို.ကျတော့ ရုန်းရကန်ရတဲ့ အထိ ဖြစ်ကြရတယ်..။ သူ့ဘ၀နဲ့သူ ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ ကိုယ်ဆိုပေမယ့် အချင်းချင်းကြားထဲမှာ ရှိတဲ့ သံယောဇဉ်က အပြောင်းအလဲ မရှိတာမို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တတ်နိုင်တာ ကူညီဖို့ကတော့ အားလုံး အဆင်သင့် ရှိကြပါတယ်..။
အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ MIT က သူငယ်ချင်းများ ကြားမှာ ရှိတဲ့ သံယောဇဉ်က တခြား သူသူကိုယ်ကိုယ် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေထက် ပိုတယ်လို့ ထင်တယ်..။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀အစ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့မှုက.. သူလိုငါလို မဟုတ်ခဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ. ခင်မင်မှုတွေကို အားကောင်းစေခဲ့တယ်..။ ပိုပြီး ရင်းနှီးစေခဲ့တယ်..။ မေဂျာတူတူ မတူတူ ချစ်ကြည်မှုက အတူတူ ဖြစ်စေခဲ့တယ်..။
ကျွန်တော်အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်က ထွက်စ စင်ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့သေးတယ်..။ စင်ကာပူရောက် သူငယ်ချင်းများက ၀မ်းပန်းတသာ အားပေးကြတဲ့အပြင်.. ကျွန်တော်လာရင် နေဖို့ ထိုင် စားဖို့သောက်ဖို့ အထိ သူတို့ ရယ်ဒီလုပ်ထားကြတယ်..။
တချို့ဆို.. ငွေရေးကြေးရေး လိုအပ်ချက်ကအစ အဆုံးစွန်အထိ ကူညီပေးဖို့ အသင့် ရှိနေခဲ့တယ်..။
ပြည်ပရောက် သူငယ်ချင်းများကအဲသလို ကျွန်တော့်အတွက် ကူညီမယ် အားတက်သရော ပြင်ဆင်နေသလို.. ပြည်တွင်းမှာပဲ အဆင်ပြေနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများက “ သူငယ်ချင်းရယ်.. နိုင်ငံခြားမသွားပါနဲ့.. မင်းဘာလိုလဲ.. ငါတို့ အားလုံး စုပြီး အလုပ်တစ်ခု လုပ်ကြရအောင် .. လိုတာသာပြော ” ဆိုပြီး သိန်းသောင်းချီ မတည် ပေးကြပြန်တယ်..။
ပြောချင်တာက.. ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းများကြား အကူအညီတောင်းတာ အကူအညီပေးကြတာ တွေဟာ တခြား သူငယ်ချင်းများ ကဏ္ဍတွေလို မဟုတ်ဘဲ.. ပိုပြီးနွေးထွေးမှု ရှိတဲ့အကြောင်းပါ..။ အဲသလို ပြောလို့ တခြား သူငယ်ချင်းများရဲ့ ခင်မင်မှုတွေကို .. နှိမ့်ချ ပြောဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး..။
တခြား သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာလဲ.. သူတို့ ရင်းနှီးမှု သူတို့ ချစ်ကြည်မှု အလိုက် .. ကူညီမှုတွေ ရှိနိုင်ပေမယ့်.. ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေလောက်.. ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှိမယ် မထင်လို့ပါ..။ ကျွန်တော်ထင်တာ မှားကောင်းမှားနိုင်ပါတယ်..။
အဲသလိုမျိုး သူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့.. တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကြားမှာ အားနာတယ်ဆိုတာ.. မရှိတော့ဘူး..။
ဇော်ကြီး ဆို.. ပြောခဲ့သလို တစ်ယောက်ထဲ မတ်တပ်အိပ် နေရတဲ့ ကောင်ဆိုတော့.. အတောင်းအရမ်းက ဘာပက်စက်သလဲ မမေးနဲ့..။
ဂျီတီ မန္တလေးကနေ မလာတာကြာလို့ ကျွန်တော်တို့ ဖုံးလှမ်းဆက်ကြတယ်..။ လာခဲ့ပါအုံး ဟ.. ဂျီတီရ ပေါ့..။
“ မလာနိုင်သေးဘူး သူငယ်ချင်းရေ.. ပိုက်ဆံ စုနေရတယ် ” လုိ့ ဂျီတီက ဖုံးထဲမှာ ပြန်ပြောတော့ ဘာအတွက် ပိုက်ဆံ စုနေရတာလဲ လို့ ကျွန်တော်တို့လဲ ပြန်မေးမိတယ်..။
“ ဇော်ကြီးက အဲယားကွန်း တစ်လုံး မပါရင် ရန်ကုန် မတက်ခဲ့နဲ့ လို့ ရာဇသံ ပေးထားလို့ ပိုက်ဆံစုနေရတာ ” လို့ ဂျီတီ က ပြန်ပြောတယ်..။
မီးရထားက အရာရှိဆိုတော့ အစိုးရကပေးတဲ့ တိုက်ခန်း ဇော်ကြီးရတယ်..။ အဲဒီအခန်းမှာ အဲယားကွန်းမရှိလို့ သူငယ်ချင်းများကို အပူကပ်တယ်..။ အခုတော့ ကျွန်တော်တို့ထဲက တစ်ယောက်က အဲယားကွန်းတစ်လုံး ပေးလိုက်ပါပြီ..။
အဲဒါကို ကြားတဲ့ နယ်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဘာပြောလဲ ဆိုတော့.. “ ဟ.. ငါရန်ကုန်မလာသေးဘူး.. တော်ကြာ ဇော်ကြီးက ဓါတ်လှေကား တောင်းနေအုံးမယ် ” တဲ့..။
နိုင်ငံခြားကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ကျွန်တော်သွားတယ်ကြားတိုင်းလဲ ဇော်ကြီးက ပြောသေးတယ်..။ “ ပေါပေါပဲပဲ တော့ လုပ်မလာခဲ့နဲ့နော် ” တဲ့..။
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းများက အဲသလိုမျိုး..။
Posted by navana at 3:10 AM
တက်ကသိုလ် ကျောင်းသားဘ၀မှာ ကျွန်တော့်နဲ့ ပိုက်ဆံအချေးအငှား လွတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းမရှိသလောက် ဆိုပေမယ့် ငလုံးဆီကနေတော့ တခါမှ ကျွန်တော်ပိုက်ဆံ မချေးခဲ့ဖူးဘူး..။ ချေးလောက်ငှားလောက် အောင် အထိ မရင်းနှီးလို့လား ဆိုပြန်တော့လဲ မဟုတ်ဘူး..။
ငလုံးဆိုတာ.. ပထမနှစ်ကနေ နောက်ဆုံးနှစ်အထိ တတွဲတွဲ ရှိခဲ့တဲ့ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းတွေထဲက တစ်ယောက်..။ ကိုယ့်ထက် အခြေအနေ ဆိုးလို့ မချေးခဲ့တာလား လို့ ပြောရအောင်ကလဲ ငလုံးတို့က သိပ်အချမ်းသာကြီးလို့သာ မပြောနိုင်တာ.. ကိုယ့်ထက် အများကြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ ကောင်..။
ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ. အချေးအငှား မခံရဘဲ ဒီကောင် လွတ်ထွက် သွားခဲ့သလဲ ဆိုတာတော့ မိုးနတ်မင်းကြီးမှ သိမှာပဲ...။
ကျောင်းပြီးစ တာမွေ၊ မလွှကုန်းလမ်းမှာ တိုက်ခန်းငှားနေကြတုံးကလဲ သူနဲ့ ကျွန်တော် အတူတူနေခဲ့ကြတယ်..။ နောက်တော့ သူက မိုးဟိန်းတို့ ကလေးတို့နဲ့ မလေးရှား ထွက်သွား.. ကျွန်တော်ကလည်း လှိုင်သာယာ သွပ်ပြားစက်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်ဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေ ခြောက်နှစ်လောက် ကွဲသွားခဲ့ကြတယ်..။
ဒါတောင် ကြိုကြားကြိုကြား တစ်နှစ်တခါလောက် သူတို့ မြန်မာပြည်ပြန်လာတိုင်း မတွေ့ကြတဲ့ အခေါက်ဆိုတာ မရှိသလောက် ပါပဲ..။ အဆက်သွယ်က သိပ်မပြတ်ခဲ့ကြပါဘူး..။ အခုတော့ သူတို့လဲ မလေးရှားကနေ အပြီးပြန်လာပြီး ကလေးနဲ့ သူ .. အပြင်အလုပ်လေးတွေ အတူတွဲလုပ်ကြတယ်..။
သူတို့အလုပ်ထဲ ကျွန်တော်မပါပေမယ့်.. ကျွန်တော်နဲ့ကလေးလုပ်နေတဲ့အလုပ်က သူတို့အလုပ်နဲ့ ဆက်စပ် နေပြန်တော့.. ငလုံးနဲ့ ကျွန်တော် တစ်လ နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက် တွေ့ဖြစ်ကြတယ်..။ တွေ့တိုင်း ကျောင်းသားဘ၀အလွမ်းပြေ အလွမ်းခြေရာလေးတွေကို အရက်သောက်ရင်း ကောက်ကြ. ပြန်ပြောင်းပြောကြ ရယ်ကြမောကြ ပေါ့..။
အဲဒီမှာ ငလုံးက စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ. အချေးအငှား မခံခဲ့ရတဲ့ သူ့အကြောင်းကို တခုတ်တရ ပြောလာခဲ့တယ်..။ ဒီလောက် ရင်းနှီးပြီး ကျွန်တော်သူ့ဆီက ပိုက်ဆံ ဘာလို့ မချေးခဲ့ဖူးတာလဲ လို့ မေးခွန်းထုတ်တယ်..။
“ ရှေ့ကလာတာ လူလားခွေးလား လူဆိုရင် ပိုက်ဆံချေး ” ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့် ဆောင်ပုဒ်မှာ သူမပါခဲ့ တာဟာ သူ့ဖက်က တခုခု ချွတ်ယွင်းခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်ရမယ်လို့ သူ့ကိုယ်သူ အပြစ်တင်မဆုံး ဖြစ်နေခဲ့တယ်..။
“မင်းက လူမဟုတ်လို့ နေမှာပေါ့. ငါက လူဆိုရင်ပိုက်ဆံချေးတာပဲလေ ” လို့ ကျွန်တော်လည်း နောက်သလိုလို ပြန်ပြောမိတယ်..။
“ ငါက အတည်ပြောနေတာ ခုံခုံ ” လို့ ကျွန်တော်နောက်တာကို တကယ်အတည်အတန့် ပြန်ပြောရင်း “ကြည့်ရတာ သူငယ်ချင်းအပေါင်းသင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ငါ့ဖက်က အားနည်းချက် တခုခု ရှိခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်ရမယ် .. မင်းပြန်စဉ်းစားစမ်းပါ.. အဲဒီတုံးက မင်းဘာဖြစ်လို့ ငါ့ဆီက ပိုက်ဆံမချေးခဲ့တာလဲ ” တဲ့..။
ငလုံးအကြောင်း ကျွန်တော်အသိဆုံး ဆိုတော့ သူ တကယ့်ကို လေးလေးနက်နက် ပြောနေမှန်း ရိပ်မိပေမယ့် ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်လောက်က သူ့ဆီက ကျွန်တော်ဘာလို့များ ပိုက်ဆံမချေးခဲ့ဖူးတာလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြန်တွေးနိုင်တော့မှာလဲ..။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်သာ အဲဒီတုံးက ချေးရင် သေချာပေါက်သူချေးမှာ ဆိုတာတော့ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ ဆိုတာ သိတယ်..။ နောက် ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်း သူ့ဆီက မချေးရဲစရာ မချေးဝံ့စရာ ကလဲ ရှိမနေခဲ့တာ အသေအချာ ဆိုတော့ အဖြေက မကြုံကြိုက်ခဲ့လို့ အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်ခဲ့လို့ ပဲ ဖြစ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အဖြေထွက်တယ်..။
အဲဒါလေး ကျွန်တော်တွေးပြီး သူ့ကို ပြန်ပြောပြရတယ်..။ အဲဒါဟာ လက်သင့်ခံနိုင်တဲ့ အဖြေမဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး ခေါင်းတယမ်းယမ်း သူလုပ်နေသေးတယ်..။
ကဲ ပါ သူငယ်ချင်းရာ.. ဟိုတုန်းက မချေးခဲ့လဲ အခုချေးပါ.. အခုချေးလဲ နောက်မကျသေးပါဘူး..ကဲ ပေးတစ်သိန်း .. ငါငွေလိုနေတယ်.. လို့ ကျွန်တော်ပြောတော့ “အေး.. ရော့ ” ဆိုပြီး ပိုက်ဆံတစ်သိန်းထုတ်ပေးတယ်..။
အဲဒီတော့မှ ငလုံးလဲ နေသာထိုင်သာ ဖြစ်သွားတော့တယ်..။
အဲဒါကြောင့် ပြောတာ..ကျွန်တော်တို့ အမ်အိုင်တီက သူငယ်ချင်းများကြားမှာ ရှိတဲ့ ရင်းနှီးမှုက တမျိုးလို့..။
Posted by navana at 1:59 AM
၀ိုင်အိုင်တီ ကျောင်းဘေး အင်းစိန်လမ်းမပေါ်မှာ ဟိုးအရင်တုံးက “ထူး” ဆိုတဲ့ အရက်ဆိုင် လေးရှိတယ်..။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ. တစ်နှစ်ပိတ်ရက်အများဆုံး ဆိုင်ပေါ့..။ တော်ကြာနေ.. ၀ိုင်အိုင်တီ စာမေးပွဲရှိလို့ တော်နေကြာ.. ဆယ်တန်းစာမေးပွဲရှိလို့ ဆိုပြီး အာဏာပိုင်များက ခဏခဏ အပိတ်ခိုင်းခံ ထိတဲ့ ဆိုင်ပဲ..။
အခုတော့ ဘုရင့်နောင် လမ်းမတန်း သစ်တောရုံးမျက်စောင်းထိုးမှာ ပြောင်းဖွင့်ထားတယ်..။ ၀ိုင်အိုင်တီကို စိတ်နာသွားသလား မသိပါဘူး..။ ဒါမှမဟုတ် နာမည်တူ တခြားဆိုင်လားတော့ မပြောတတ်ဘူး..။
ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားဘ၀မှာတုံးက အဲဒီဆိုင်နဲ့ ခ၀ဲခြံက သဇင်မင်း ဆိုတဲ့ ဆိုင်ဟာ စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများရဲ. ခြေရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေခဲ့တာပေါ့..။ အဲဒီနှစ်ဆိုင်မှာ သဇင်မင်း ဆိုတဲ့ ဆိုင်က ပိုပြီးဈေးချိုတယ်..။ အစားအသောက်ကလဲ ပိုပေါတယ်..။
ဒါပေမယ့် ထူးကတော့ ကျောင်းနဲ့ ပိုနီးတယ်..။ ၀ပ်ရှော့တွေဖက်က အုတ်တံတိုင်းနဲ့ဆို ထူးနဲ့က လမ်းပဲ ခြားတယ်..။
ငလုံးနဲ့ ဥက္ကာက ကျောင်းမှာနေကတည်းက အရက်အတော်သောက်နေကြပြီ..။ ထူး နဲ့ သဇင်မင်းဆိုတာ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်လောက် သူတို့ ရောက်ဖြစ်တဲ့ နေရာတွေ..။
တရက် ငလုံးနဲ့ဥက္ကာ ထူး ကို သွားသောက်ပြီး ပြန်လာကြတယ်..။ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် နောက်ဆုံး ခွက် နောက်ဆုံးခွက်နဲ့ မော့လိုက်ကြတာ.. အရှိန်မထိန်းနိုင်ဖြစ်ဘူး.. မိုးအတော်ချုပ်သွားတယ်..။
ဆိုင်ကနေပြန်တော့ အတော်ညဉ့်နက်နေပြီ..။ ပုံမှန် ဂိတ်ဝင်ပေါက်က အဲဒီအချိန် ပိတ်သွားတော့ နှစ်ယောက်သား ၀ပ်ရှော့တွေနား အုတ်တံတိုင်းကို မူးမူးနဲ့ ကျော်ခွ ၀င်ကြတယ်..။ သူတို့ အဲသလိုမျိုး ကျော်ခွဝင်တာကို မြင်တဲ့ လုံခြုံရေး အဘိုးကြီးက ကျောင်းသားတွေမှန်းသိတော့ မမြင်ချင်ယောင် ဆောင်နေတယ်..။
အမှန်ကတော့ အဲသလိုမျိုး အုတ်တံတိုင်း ကျော်ခွဝင်ရင် .. လုံခြုံရေးအနေနဲ့ တိုင်ချင် တိုင်လို့ရတယ်..။ အဘိုးကြိးခမျာလဲ အေးရာအေးကြောင်း ပြသာနာ မဖြစ်ပြီးရောဆိုပြီး မမြင်ချင်ယောင် ဆောင် နေဟန် တူပါတယ်..။ ၀ိုင်အိုင်တီ ကျောင်းတော်ကြီးသား တွေဆိုကလည်း များသောအားဖြင့် မြွေတွေ ကိုး..။
ဒါပေမယ့် လုံခြုံရေးအဘိုးကြီး ကအေးပေမယ့် ငလုံးနဲ့ဥက္ကာက မအေးဘူး..။ မူးမူးနဲ့ အဲဒီအဘိုးကြီးကို ရစ်ကြတော့တယ်..။ “ ခင်ဗျားက ဘာလဲ” လို့ ငလုံးကမေးတော့ အဘိုးကြီးက “ ဦးက လုံခြုံရေးပါကွယ်” လို့ ပြန်ဖြေတယ်..။
လုံခြုံရေးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အုတ်တံတိုင်းကျော်တက်တာကို ခင်ဗျား မြင်မှာပေါ့ .. လို့ ဥက္ကာ က ၀င်ထောက်တယ်..။
“ မြင်ပါတယ်ကွယ် .. လူကလေးတို့က ကျောင်းသားတွေမို့လား.. အဆောင်ပြန်ကြတော့လေ ” လို့ အဘိုးကြီးလည်း ပြေလည်ရာပြေလည်ကြောင်း ပြောရှာတယ်..။
ဒါပေမယ့် သကောင့်သား နှစ်ကောင်က “ဟ.. ခင်ဗျား ကျုပ်တို့ အုတ်တံတိုင်းကျော်တက်တာကို မြင်ရဲ.သား နဲ့ အရေးယူမယ်မလုပ်ဘဲ ဒီအတိုင်းမမြင်ချင်ယောင် ဆောင် လွှတ်ပေးလို့ ရမလား .. တာဝန်ပျက်ကွက်မှုနဲ့ ခင်ဗျားကို ပါမောက္ခချုပ် နဲ့ တိုင်မယ် အခုလိုက်ခဲ့ .. ” လို့ လုပ်ကြတော့တယ်..။
“ တောင်းပန်ပါတယ် လူကလေးတို့ရယ်.. ဦးလေးဖာသာနေပါရစေ ..ပြန်ကြပါတော့ ” လို့ နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက် တောင်းတောင်းပန်ပန် ပြောမှ ငလုံးတို့လဲ ယိုင်တိယိုင်ထိုးနဲ့ ပြန်ခဲ့ကြတော့တယ်..။
Posted by navana at 1:45 AM
ဖားကြီးနဲ့ငလုံး ရဲ့ ဇာတ်လမ်းက တမျိုး..။ ဖာကြီးဆိုတာ.. ကလေး က..။
ကျွန်တော်ပြောပြောနေတဲ့ ကလေး ဆိုတဲ့ သန်းဝင်းနိုင်နဲ့ တမြို့တည်းသားတွေ..။ သန်းဝင်းနိုင်က ဆယ်တန်းတစ်နှစ်ကျပြီး နောက်နှစ်မှ အောင်တော့ အမ်အိုင်တီမှာ ပဲ တက်ရတော့တယ်..။ ဖားကြီးကတော့ ဆယ်တန်းကို နှစ်ချင်းပေါက် အောင်ပြီး အာအိုင်တီ ရောက်သွားခဲ့တယ်..။
အတန်းသာ ကွာတာ.။ အားလုံးက ရွယ်တူတွေဆိုတော့ ကလေး က တဆင့်သိရပေမယ့် .. ဖားကြီးနဲ့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က ရင်းနှီးတယ်..။ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေလိုပါပဲ..။
မဒမ်ကဆို အမြဲပြောတယ်..။ တော့်သူငယ်ချင်းတွေကလဲ ဘီလူးတဲ့၊သူကြီးတဲ့၊ဖားကြီးတဲ့ ဘာနာမည်တွေမှန်းကိုမသိဘူး ဆိုပြီး..။ ဒါတောင် သူမသိသေးတဲ့ ဂုတ်သရိုး ဆိုတဲ့ကောင် ရှိသေးတယ်..။
တရက် ခ၀ဲခြံ သဇင်မင်းကို ဖားကြီးနဲ့ ငလုံး သွားသောက်ပြီး မူးမူးရူးရူးနဲ့ ဆိုက်ကားငှားစီး ပြန်လာကြတယ်..။
ဖားကြီးက တလမ်းလုံး အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြောလာတော့ ဆိုက်ကားဆရာက နိုင်ငံခြားသား ထင်နေတယ်..။ အာအိုင်တီ မိန်းဂိတ်ဝရောက်တော့ ဖားကြီးက ဆိုက်ကားပေါ်က ဆင်းရင်း how much လို့ ဘိုလို မေးတယ်..။
နဂိုရ်ကမှ နိုင်ငံခြားသား ထင်နေရတဲ့ အထဲ how much လို့ မေးတော့ ဆိုက်ကားဆရာလဲ give me 40 dollars လို့ ပြန်ပြောတယ်..။ သူကလဲ မခေဘူး..။
ငလုံး ဆို မူးနေတဲ့ကြားက ဆိုက်ကားဆရာ အဲသလိုပြန်ပြောတာကြားပြီး အန်ထွက်မတတ်ရယ်တယ်..။ ဖားကြီးခမျာတော့ “ ဟာ ဦးလေးရယ် သဇင်မင်းကနေ ဒီနား တစ်ရာ တော်ပြီပေါ့ ”လို့ ရယ်ရယ်မောမော ပြန်ပြောပြီး တစ်ရာထုတ်ပေးလိုက်ရတယ်..။
Posted by navana at 1:43 AM
ငလုံးအကြောင်းရေးရင်း ဂုတ်သရိုးအကြောင်း သတိရလာတယ်..။ သူလည်း မိုးဟိန်းလို မုံရွာသားပဲ..။ ဂုတ်သရိုး လို့ ဘာလို့ ခေါ်တာလဲ လို့ မိုးဟိန်းကို မေးကြည့်ဖူးတယ်..။ ဂုတ်ဆိုတာ ဆိတ်ကွာ.. သရိုး ဆိုတာ ပစ်တာ.. ကိုဆိတ်ပစ် လို့ သာမှတ်ထားလိုက်လို့ မရေမရာ ပြန်ပြောတယ်..။
ဘာလို့ ခေါ်မှန်း မသိပေမယ့် ခြောက်နှစ်လုံးလုံး ဂုတ်သရိုး ပဲ ခေါ်လာကြတော့ သူငယ်ချင်းအားလုံးက ဂုတ်သရိုးပဲ ခေါ်ကြတော့တယ်..။ ပိန်ပိန် အရပ်နည်းနည်းရှည် တဲ့ အညာသား ရုပ်နဲ့ ကောင်ပဲ..။ အရက် ဆေးလိပ် တအားသောက်တော့ ပါးရိုးနားရိုး နည်းနည်း ချောင်တယ်..။
ကျောင်းသာ ပြီးသွားတယ်..။ ရည်းစားဆိုလို့ မူးလို့ ရှုစရာတောင် မရှိဘူးဆိုတဲ့ ကျောင်းသားစာရင်းထဲမှာ သူက ထိပ်ဆုံးက ပါတာပေါ့..။
ငါက ရုပ်သာဆိုးတာ.. ငါ့ဖင်ကတော့ မင်းတို့မျက်နှာတွေထက် ချောတယ်ဗျ လို့ မကြာခဏ အရွှန်းဖောက်တဲ့ ကောင်ပဲ..။
တကယ်လည်း ဟုတ်တယ်..။ အာအိုင်တီ အီးဆောင် အပေါ်ထပ်ကနေ လှေကားလက်ရမ်း အတိုင်း တရက် သူလျောစီးဆင်းတယ်..။ အောက်နား ရောက်ခါနီးမှ ဟန်ချက်ပျက်ပြီး ပုဆိုးလှန်ပြီး လူက လေးဘက်ထောက် ရက် ကျတယ်..။
အဲဒီမှာ ဂုတ်သရိုး ရဲ. ဖင်ကို ကျန်သူငယ်ချင်းတွေ မြင်ခွင့်ရသွားခဲ့ပြီး အားလုံးက တညီတညွှတ်တည်း “ဖင်တော့ အတော်ချောတဲ့ကောင် ၀င်းမွှတ်နေတာပဲ ” လို့ မှတ်ချက် ပေးကြတယ်..။
ငလုံး ကဆို.. ဂုတ်သရိုးဆိုတဲ့ကောင် ညတိုင်းဖင်ကို မိတ်ကပ်လိမ်းအိပ်တယ် ထင်တယ် လို့တောင် ပြောတယ်..။
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘ၀ကို ရည်းစားလက်မဲ့ အံကြိတ်ဖြတ်ကျော်သွားတဲ့ ဖင်ခပ်ချောချော နဲ့ ဂုတ်သရိုး ကျောင်းပြီးတော့ မုံရွာမှာပဲ မိဘလက်ငုတ် စီးပွားရေး ပြန်လုပ်တယ်..။ အဲဒီမှာ ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ သူရည်ငံတယ်..။
တသက်လုံး ရည်းစားမထားခဲ့တဲ့ ဂုတ်သရိုး ပျော်ပြုံးလို့ မဆုံးခင်မှာဘဲ..သူ့အမေက ကောင်မလေးနဲ့ သဘောမတူဘူး ထလုပ်တော့ ဂုတ်သရိုး အသည်းကွဲ ရရှာတယ်..။ ကောင်မလေးက ချို့တဲ့ဟန် ရှိပါရဲ့..။
အဲဒါကို ကြားတဲ့ သူငယ်ချင်းများက.. ဂုတ်သရိုးနဲ့ တွေ့တိုင်း “မခင်ဥာဏ်ရဲ့ တည်ကြက်လဲ ကြည့်အုံးမှာပေါ့ မိတဲ့ကြက်က သေးတယ် ပြောမနေနဲ့ ” လို့ နောက်ပြော ပြောကြတယ်..။
ဂုတ်သရိုးအမေ နာမည်က ဒေါ်ခင်ဥာဏ်တဲ့..။ သူများသားသမီး နဲ့ သဘောမတူဘူး ပြောမနေနဲ့ ကိုယ့်သားကိုလဲ ကြည့်အုံး လို့ ဆိုလိုတာပဲ..။
ကျွန်တော်တို့အညာမှာ တောကြက်တို့ ချိုးငှက်တို့ ထောင်တဲ့ ငှက်ထောင် သမားတွေ ရှိတယ်..။ ကြက်တို့ ချိုးငှက်တို့မှာ ကိုယ်ပိုင် နယ်လေးတွေရှိတယ်..။ တောကြက်ဖ တစ်ကောင် က သူပိုင်တဲ့ နယ်ထဲမှာပဲ နေတယ်..။ နယ်ကျော် နယ်ကျွံလာတဲ့ ကြက်ဖဆိုရင်.. နယ်ခံ ကြက်ဖက အသံကြားတာနဲ့ေ၇ာက်လာပြီး ခွပ်တော့တာပဲ..။
အဲဒါကို သိတဲ့ ငှက်ထောင်သမားက တည်ကြက်လို့ ခေါ်တဲ့ သူ့ကြက်ကို ထောင်ချောက်ထဲ ထားပြီး တွန်စေတယ်..။ တည်ကြက် တွန်သံကြားပြီး ခွပ်ဖို့လာတဲ့ နယ်ခံ ကြက်က ခွပ်ရင်း ထောင်ချောက်ထဲ အမိခံရတာမျိုးပေါ့..။
အဲဒီကနေ.. “ မိတာ သေးတယ်ကြီးတယ် လုပ်မနေနဲ့ တည်ကြည်လဲ ကြည့်အုံးမှပေါ့ ” လို့ အညာမှာ ပြောလေ့ရှိတယ်..။
Posted by navana at 1:42 AM
ကဲ.. အမှတ်တရ တက်ကသိုလ်နေ့ရက်များ အကြောင်းရေးတာ နည်းနည်းများသွားပြီ.. စုံသလောက်လည်း ရှိပြီ.. လောလောဆယ်.. မွေးသဖခင် နဲ့ မွေးသမိခင်၊ မိဘနှစ်ပါး အကြောင်း မိသားစုအကြောင်းလေးတွေ မျှဝေပါ့မယ်..။
ဘလော့ဂ်ကြွလာ ဆွေသဟာများ ပျော်ပြုံး ရင်း ဘ၀အမောတွေ ပြေနိုင်ကြပါစေ..။
စာရေးဆရာမောင်သာရ ရဲ. ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်ရှိတယ်..။ မန်းတလေး တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား တွေ လေ့လာရေးဆင်းတဲ့ အကြောင်းလေး ရေးထားတဲ့ “ ၀က်လူးကျေးရွာ သွား တောလား “ ဆိုတဲ့ဝတ္ထု
အဖေက အဲဒီ ၀က်လူးကျေးရွာအုပ်စု ဆူးဖြူးကုန်း(ဆိတ်ဖြူကုန်း) ရွာသား..။ တချို့ က မြင်းခြံခရိုင် နွားထိုးကြီးမြို့ ၀က်လူးကျေးရွာအုပ်စု ဆိတ်ဖြူကုန်းရွာ ဆိုပြီး အပြောင်အပျက်တောင် ပြော ကြတယ်..။
အားလုံးက တိရိစ္ဆာန် နာမည်တွေချည်း ဖြစ်နေတာကိုး..။
အဖေ့ အမေက ကသည်းသွေး ၅၀ ပါတော့ အဖေက ကသည်းသွေး ၂၅ ပါတယ်..။ ညီအကို မောင်နှမ တဆယ့်သုံးယောက် ထဲမှာ အဖေက နံပါတ်လေး..။
အဖေ့ကို သူ့အဘိုး (သူ့အမေရ.ဲအဖေ) က သိပ်ချစ်တယ်..။ သိပ်လည်း အလိုလိုက်တယ်..။ အလိုလိုက်ခံရလွန်းလို့ အဖေကလည်း ဆိုးတယ်..။ ကျန်ညီအကိုမောင်နှမများက အဖေ့ နာမည်ရင်း အုံးဖေ အစား ကုံးဖေ လို့ ခေါ်ကြတယ်..။
အဖေက တအား ကုံးတိုက်လို့တဲ့..။
အမေကတော့ ပခုက္ကူ ဦးအုံးဖေ နဲ့ မရဘဲ ဆီမီးခုံဦးအုံးဖေ နဲ့ ညားတာ ငါးပါးမှောက်တာပဲ လို့ အဖေ့ကို မကြာခန စလေ့ ရှိတယ်..။
အဖေက စကားပြော ကောင်းတယ်..။ အောက်ကလိအာ လည်း သိပ်ပြောတတ်တယ်..။ သားသမီး တွေနဲ့ သူငယ်ချင်းပေါင်း ပေါင်းတယ်..။
ဒီရက်ပိုင်း စာအုပ်ပုံအဟောင်း ပြန်မွှေရင်း ကျွန်တော် ရှေ့နားမှာ ရေးခဲ့တဲ့ အဖေ့စာ လေး ပြန်တွေ့လို့ အဲဒါလေး စကင် ဆွဲပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ ‘အချိန်တန်ရင်” ဆိုတဲ့ စာ မဟုတ်ပါဘူး..။ အလုပ် က ရခါစ၊ မိဘများကို မထောက်ပံ့နိုင် ဖြစ်နေတဲ့အချိန်.. မဂ္ဂဇင်း တအုပ်ထဲက အဖေဖြတ်ပြီး ကျွန်တော့်ဆီ ပါးလိုက်တဲ့ ကာတွန်းလေး တပုဒ်ပါ..။
ဘလော့ဂ်ဂါ တွေလို ပြောချင်တာကို ပုံနဲ့ ပြောတာ အဖေက အစောကြီးကတည်းက တတ်နေတာ.. ဟားဟား..
Posted by navana at 4:20 PM